YEYINTNGE(CANADA): Friday, March 29
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ၏ မိန့် ခွန်း ရာနုံးပြည့်ထောက်ခံသည်
( ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ထိပါးလာရင်တော့ ကျွန်တော့်ကို အခြေခံဥပဒေက အပ်နှင်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ၊ လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အင်အားကို အသုံးပြုပြီး အကာအကွယ်ပေးသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး ကလည်း မေတ္တာကို အရင်းခံ၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားကို လက်ကိုင်ထားပြီး အမြင်ကျယ်ကျယ်၊ သတိကြီးကြီးနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ကျွန်တော် အလေးနက် တိုက်တွန်းမေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ် ။ )
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ မိတ္ထိလာအရေးအခင်းနှင့် စပ်လျှဉ်းပြီး ယနေ့ ကြေညာသောမိန့် ခွန်းသည် ပြည်သူတရပ်လုံးအတွက် ရာခိုင်နုံးပြည့်ထောက်ခံရမည့် မိန့် ခွန်းဖြစ်သည် ။ သို့ အတူ ပြည်ပတွင်နေထိုင်သော ကျွန်တော်တို့ ကလည်း အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံသည် ။ အထက်ပါမိန့် ခွန်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သမ္မတကြီးသည် ပြည်သူတရပ်လုံးနှင့် နိုင်ငံတော်ကြီး တခုလုံးအား ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများကို နှလုံးမူကာ ကမ္ဘာသို့ကြေညာပေးလိုက်သော အသံဖြစ်သည် ။ သမ္မတကြီး၏ တိကျသောပြောဆိုမှုသည် အနောဂါတ်အရေးကို မျှော်မှန်းပြီး ထောက်ပြထားခြင်းဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံး မမှိတ်မသုံ အစိုးရနှင့်အတူ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ပူးပေါင်းရန်မှာလည်း အမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်သည် ။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သောနိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း အခြားသောဘာသာများကို ကိုးကွယ်ယုံကြည့်ခွင့်အား ခွင့်ပြုပေးထားသောနိုင်ငံဖြစ်သည် ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာပင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွပ်လပ်စွာကိုးကွယ်မှု ။ လွပ်လပ်စွာဘာသာရေး စာအုပ်စာပေဖြန့် ချီမှု ၊ လွပ်လပ်စွာဘာသာရေးတရားဟောပြောမှုတို့ ကို ဥပဒေအရ ခံစားနိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ဖွင့်ဆိုဖေါ်ပြထားသည် ။ ဤသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနှင့် ဖွဲ့ စည်းထားသော နိုင်ငံတော်ဖြစ်သလို လူမျိုးခြားများလည်း ရောပြွမ်းနေထိုင်လျှက်ရှိကြရာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သော မည်သည့်လူမျိုးမဆို မိမိတို့ယုံကြည်ရာကို လွပ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် ပေးထားသော နိုင်ငံတကာစံချိန်မှီ နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည် ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အချို့ သောဘာသာရေးအစွဲအလမ်းကြီးမားသော နိုင်ငံများတွင် ဘာသာရေးလွပ်လပ်ခွင့်မရှိဘဲ ဘာသာမတူ ယုံကြည်ရာကို ကိုးကွယ်သည်နှင့် ရက်ရက်စက်သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းတို့ ကို နေ့ စဉ်မြင်တွေ့ နေကြရသည် ။ ဘာသာရေးကြောင့် သွေန်းစွန်းနေကြသည် ။ ထို့ ကြောင့်ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှာမူ ဘာသာပေါင်းစုံကိုးကွယ်နိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ၀င့်ကြွးစွာ ဂုဏ်ယူပြောဆိုနိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်နေသည် ။
ယခုလတ်တလောတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဘာသာရေးကွဲပြားကြသူများမှာ ပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်နေကြရာ ကြားရသူမြင်တွေ့ ရသူအပေါင်း စိတ်နှလုံး မချမ်းမြေ့စွာဖြင့် ခံစားနေဖြစ်ကြရသည် ။ ဤကဲ့ သို့ သာသနာဖန်တီးကြသူများမှာလည်း ဘာသာခြားများပင် အစကနဦး ပြုလုပ်ဖန်တီးမြဲ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ ရသည် ။ အဆိုးဆုံးစိတ်ခံစားရမှုမှာ ကျွန်တော်တို့ ၏ ဘုရားရှင်အား ဆဲဆိုစော်ကား ခွေးနှင့်နိုင်းကာ ပြောဆိုရေးသားနေသောသူများ ၊ ဆရာတော်ရဟန်းသင်္ဃာတော်များအား အထူးသဖြင့် အရှင်ဦးဝီရသူအား မြန်မာလူမျိုးများက စော်ကားမော်ကား ရေးသားနေသူများ ၊ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တို့ ၏ -၉၆၉-ဆိုသော တရားတော်စာပိုဒ်အား မထီမဲ့ မြင်ရေးသား ပုတ်ခပ်နေသူများကို မြင်တွေ့ ရခြင်းကြောင့် ခံစားရဖြစ်သည် ။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဒ၏ တရားတော်များကို ချီးမွှမ်းစာများ ရေးသားခွင့်၊ စာရွက်စာတမ်းကပ်ခွင့်ကိုပင် အကြမ်းဖက်ရေးသားဆောင်ရွက်နေကြသည်ဟု ပြောနေသည်ကို မြင်ရရာ လွန်စွာ ရယ်မောစရာဖြစ်သည် ။ သည်းခံခြင်းပါရမီနှင့် ပြည့်စုံသောဗုဒ္ဒဘုရားရှင်သည် ကျွန်တော်တို့ အား သင်ကြားညွှန်ပြ ပေးသနားတော်မူပြီးထားဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များအဖို့သည်းခံခြင်းတရားကို လက်ခံထားကြသူများဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်မြင်တွေ့သိသရွေ့ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဘာသာတရားနှင့် ပတ်သက်၍ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေကြသူများမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များ မဟုတ်ဘဲ မူဆလင်ဘာသာဝင်များနှင့် မြန်မာလူမျိုးဟု ဆိုပြီး မူဆလင်ဘာသာဝင်များဖက်မှ လိုက်လံချေပ လှုံ့ ဆော် ရေးသားနေသူများမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်နေသည်ကို မြင်တွေ့ နေရခြင်းဖြစ်သည် ။
၄င်းထက်ပိုမို ဆိုးရွားသည်ကား မြန်မာနိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်သော ဗွီဒီိယိုရုပ်သံဖိုင်ပင်ဖြစ်သည် ။ အကြမ်းဖက်သမား တာလီဘန်ခေါင်းဆောင် အိုစမာဘီလာဒင်လို သေနတ်ကို ဘေးနားချကာ မြန်မာအစိုးရကို ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုနေသော ဗွီဒီိယိုရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်မှုကို မြင်တွေ့ ကြရရာ ဤအကြောင်းအရာအား မိတ္ထိလာအရေးအခင်းနှင့် ဆက်စပ်တွေးခေါ်နိုင်စရာဖြစ်လာသည် ။ ပြည်ပမှစွက်ဖက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအား ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုကို မည်သည့်အခါမှ မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်မခံခဲ့ ဂရုမစိုက်ခဲ့ ခြင်းကို နားမလည်ဘဲ မဆင်မခြင် ပြောဆိုလာမှုဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားမော်ကား ပြောဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုကို ရင်ဆိုင်လာသောအခါ အစိုးရ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာများကို ကာကွယ်ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ပြသရန် အထူးလိုလာသည် ။ မလောက်လေးမလောက်စား ဗွီဒီိယိုရုပ်မြင်သံကြားမှ မျက်နှာဖုံးကာပြီး ပြောဆိုလာခြင်းကို ဂရုစိုက်စရာ မရှိသော်လည်း ဤကိစ္စအား မြန်မာအစိုးရသည် တုန့် ပြန်ရမည်ဖြစ်တော့သည် ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအား ခြိမ်းခြောက်သော ပုံစံမျိုးဖြင့် ခြိမ်းခြောက်နေခြင်းကို မြန်မာအစိုးရသည်လည်း သိနေသလို အမေရိကန်အစိုးရကလည်း သိရှိနေပြီဖြစ်သည် ။
သည်တော့ ယနေ့ တွင် မိတ္ထိလာအရေးအခင်းနှင့် စပ်လျှဉ်းပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ပြည်သူတရပ်လုံးအား မိန့် ခွန်းပြောရာ၌ ဤသို့ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများအပေါ် တုန့် ပြန်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမြင်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတို့ ၏ ဗုဒ္ဒဘာသာ သာသနာတော်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ထိမ်းသိမ်းရေးနှင့် ပြည်သူတရပ်လုံး၏ အန္တာရယ်ဟူသမျှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်ဟု ဂတိပေး ပြောဆိုခြင်းကား လွန်စွာအားရစရာ ကောင်းသည် ။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်၏ အန္တာရယ်ကို ကြိုတင်မြင်နေသူများကလည်း မည်သူတို့ က သွေးထိုးလှုံ့ ဆော်နေသည် ၊ မည်သူတို့ က ကောလဟာလ ဖန်တီးနေသည် ၊ စသည်တို့ ကို ယောင်ဝါးနေပြီး ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုနေခြင်းထက် အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းပြီး တိကျစွာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖန်တီးရယူရန်လိုသည် ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကလည်း အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ထားရာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းမဆို မိမိတို့သိထားသော သတင်းအချက်အလက်များ ရှိသည်ဟု ဆိုသူများအနေဖြင့် အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြရန်လိုသည် ။ သို့ မှသာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ မိန့် ခွန်းအား ရာခိုင်နုံးပြည့် ထောက်ခံပွဲကျင်းပကာ မြန်မာနိုင်တ၀ှမ်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဗုဒ္ဒဘာသာစည်ပင်ပြန့် ပွါးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပေသည် ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/29/20130အကြံပြုခြင်း
ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Baird ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးကနေဒါသံအမတ်ကြီးကိုလက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံကနေဒါသံရုံးမှာ
အမှုထမ်းနေတဲ့Mark McDowell ကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။
Mark McDowell ဟာ New York City, Taipei နဲ့ Bangkok မြို့များမှာလည်းသံအမှုထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကနေဒါက Harvard University မှာတနှစ်ခန့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသုသေသနပြုလုပ်ဖူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Mark McDowell (BA [History], University of Toronto, 1988; MA [East Asian Studies], University of Toronto, 1990;
MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, 2008) joined External Affairs and International Trade
Canada in 1994 asaforeign service officer. In Ottawa, Mr. McDowell worked with the Caribbean and Central
America Division, the South Asia Division, and the Aboriginal and Circumpolar Affairs Division. More recently,
he was director of the Public Diplomacy and Domestic Outreach Division. Abroad, Mr. McDowell has served in
New York City, Taipei and Bangkok. From 2008 to 2009, Mr. McDowell wasafellow at Harvard University,
where he carried out research on contemporary issues in Burma. Since 2010, Mr. McDowell has been
counsellor for public diplomacy at Canada’s Embassy to China.
ဖိုးလပြည့်ကH20 မဏ္ဍပ်ပြန်လုပ်အုံးမယ်ဆိုဘဲ..အဲဒါကိုကန်ထရိုက်ယူထားတာ ကုလားတယောက်ပါ... သိန်း ၅၀ နဲ့ဆောက်လုပ်ခွင့်ရထားတယ်...
အဲဒါသစ်ဆိုင်ကကုလား ... အဲကုလားနံမည် မြင့်ဌေးလို့ခေါ်တယ်..တောင်ဥက္ကလာ မှာရွှေညောင်ပင်သစ်ဆိုင်ပိုင်တယ်
.. အဲကုလားပာာခ်ျ ဟာဂျီတစ်ယောက်ပဲ...ကုလားကကြောက်လို့ သိန်း ၄၀ နဲ့တဆင့်ပြန်ပေးနေတယ်...
အဲ့ကုလားကန်ထရိုက် သင်္ကြန်မှာ ၆...ခုလောက်ရထားတယ်.....
by Wira Thu (Notes) on Tuesday, March 26, 2013 at 7:11am
(၉၆၉)သည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာရတနာသုံးပါးကို ကိုယ်စားပြုသော ဂဏန်းသုံးလုံးသာ ဖြစ်သည်။
(၉၆၉)၏ အဓိကပန်းတိုင်မှာ အမျိုးဘာသာ သာသနာအဓွန့်ရှည် တည်တန့်ခိုင်မြဲရေး ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားဦးရေ အိမ်ခြေ မလျော့ပါးရေး
တိုင်းရင်းသား နယ်မြေ မလျော့ပါးရေး.. တို့သည် (၉၆၉)၏ အဓိကပန်းတိုင်ဖြစ်သော အမျိုးဘာသာ သာသနာ အဓွန့်ရှည်တည်တန့် ခိုင်မြဲရေးတွင် အကျုံးဝင်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်/တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းသာ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်/တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းသာ အိမ်/မြေ အငှားထား ရောင်းချခြင်း၊
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်/တိုင်းရင်းသားပိုင် ဈေးဆိုင်များမှာသာ ဈေးဝယ်ခြင်း၊
အိမ်ဖော်၊ အလုပ်သမား ငှားသည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်ဖော်အလုပ်သမား လုပ်သည် ဖြစ်စေ- ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်/တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းသာ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခြင်း-များကိုသာ ဦးစားပေး ဟောပြောစည်းရုံးသည်။
(၉၆၉)သည် လူသတ်ဝါဒ မဟုတ်သလို၊ လူသတ်ဝါဒကို လက်မခံ အားမပေး၊ ကန့်ကွက် ရှုတ်ချသည်။
(၉၆၉)သည် အကြမ်းဖက်ဝါဒ မဟုတ်သလို၊ အကြမ်ဖက်ဝါဒကိုလက်မခံ အားမပေး ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည်။
(၉၆၉)သည် အနိုင်ကျင့်ဝါဒ မဟုတ်သလို၊ အနိုင်ကျင့်ဝါဒကို လက်မခံ အားမပေး၊ ကန့်ကွက် ရှုတ်ချသည်။
(၉၆၉)သည် လူ့အသက်မပြောနှင့် တိရစ္ဆာန်အသေးအမွှားလေးများ၏ အသက်ကိုပင် တန်ဖိုးထားလေးစားသည်။ ကြင်နာသနားသည်။ စာနာမှုအပြည့်ရှိသည်။ (၉၆၉)၏ အဆုံးအမလာ ကံငါးပါးလုံခြုံရေးတွင် ပါဏာတိပါတကံ (သူ့အသက်မသတ်ရ ပညတ်ချက်) ပါဝင်သည်။
(၉၆၉)သည် သွေးစွန်းခြင်း၊ သွေးဆာခြင်း၊ သွေးတောင်းခြင်းကို မလိုလားသလို သွေးစွန်းသော လက်နှင့် သွေးဆာသွေးတောင်းသူများကိုလည်း မေတ္တာရေဖြင့် သန့်စင်ဆေးကြော ဆုံးမမှုကိုသာ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။
(၉၆၉)သည် ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးကို လိုလားပြီး၊ ထိုသို့ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို အခွင့်သင့်တိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလေ့ရှိသည်။
(၉၆၉)သည် နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှု၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားအောင် လှုံဆော်ခြင်း အလျဉ်းမရှိသလို၊ ငါနှင့်မတူ ငါ့ရန်သူ မူဝါဒကိုလည်း ကျင့်သုံးလေ့မရှိသည့်အပြင်၊ မိမိဘာသာ သာသနာမှတစ်ပါး အခြားသော ဘာသာ သာသနာကို ထိပါးပုတ်ခတ်ခြင်း၊ ကျူးကျော်စော်ကားခြင်း၊ ရန်လိုရန်မူခြင်းလည်း လုံးဝမရှိပေ။
(၉၆၉)သည် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကို ရာနှုန်းပြည့်ကျင့်သုံးပြီး၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်နေသူများကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချလေ့ရှိသည်။
(၉၆၉)သည် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝပေးထားပြီး၊ အမျိုးသမီးများကို ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ် ကန့်သတ်တားမြစ်မှုများကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်လေ့ရှိသည်။
(၉၆၉)သည် (၂၄)ရာစုမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရေး အိပ်မက်ရှည်ကြီး မက်လေ့မရှိသလို ကေသမုတ္တိသုတ္တန် (ကာလာမသုတ္တန်)လာ ဘာသာတရားတစ်ခုကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးမှ လက်ခံထိုက်သည့် ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို အမြဲတစေလေးစားဆောက်ရွက်သည်။
(၉၆၉)သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစဉ်အမြဲ လိုလားပြီး၊ အသားအရောင် ခွဲခြားခြင်း၊ လူမျိုးဘာသာခွဲခြားခြင်း၊ အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်းမျိုးကို လူသားမဆန်မှုဟု ရှုမြင်သည်။
(၉၆၉)သည် ဘာသာလူမျိုးကွဲပြားသူများနှင့် ပြဿနာဖြစ်လျှင် အမျိုးသားရေး ပြဿနာအဆင့်သို့ မရောက်စေရန် ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ထိရောက်စွာ အရေးယူမှုကို လိုလားပြီး အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းကို လုံးဝမလိုလားပေ။
(၉၆၉)သည် အတ္တကို ဗဟိုပြုသည့် မူဝါဒကို မကျင့်သုံးသလို အနတ္တကို ယုံကြည်ရေးကိုသာ အလေးထားသည်။
(၉၆၉)ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ စာရေးဆရာနှစ်ဖက်လှကျော်လွင် (သာထွန်းပြန့် ညွှန်ချုပ်-ငြိမ်း)က တီထွင်ပြီး ခရစ်နှစ် 1998-1999-ခုနှစ်ခန့်မှာ “နှစ်ဖက်လှ၏ နှစ်ဖက်လှ” စာအုပ်မှာ စ,တင်သုံးစွဲခဲ့သည်။
(၉၆၉) ကို မော်လ်မြိုင်မြို့၊ ဂဏဝါစက သံဃာ့ကွန်ရက်မှ စတင်သုံးစွဲပြီး စတေကာများပြုလုပ်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ၏ အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတအဖြစ် သာသနာ့အလံတော်၊ ဓမ္မစကြာစက်ဝိုင်း၊ အသောကကျောက်စာတိုင်တို့ကို နောက်ခံထား၍ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။
“၉၆၉ နှင့် မိတ္ထီလာ”
(၉၆၉) အဖွဲ့ဟု အများသိသော မော်လမြိုင် ဂဏဝါစက သံဃာ့ကွန်ရက် အဖွဲ့သည် မိတ္ထီလာမြို့သို့  မရောက်သေးသလို၊ (၉၆၉)တံဆိပ် စတေကာများလည်း မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဖြန့်ဝေထားခြင်း လုံးဝမရှိပါ။
သို့ ဖြစ်ပါ၍ (၉၆၉)သည် ရတနာသုံးပါးကို ကိုယ်စားပြုသည့် အပြစ်ကင်းစင်သော ဂုဏ်ပုဒ်များဖြစ်သလို၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အသက်ထက်ဆုံး ယုံကြည်ကိုးကွယ်သော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားသော အဖိုးအနဂ္ဃထိုက်တန်သည့် ရတနာမြတ်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် (၉၆၉)ဆိုင်းဘုတ်များကို ဖြုတ်ချ ဟန့်တား နှောက်ယှက်ခြင်းဖြင့် ဗုဒ္ဓသာသနာကို မစော်ကားမိဖို့ အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပါသည်။
26.3.2013 (10း07-am)
“ဦးသောဘိတ….. ရေ …… အမျှ….အမျှ….”အပိုင်း (၁)
by Wira Thu (Notes) on Monday, March 25, 2013 at 4:07am
(ဦးသောဘိတ သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ သိမ်ကျောင်းဆောင်မှာ ချိတ်ဆွဲထားသော ဦးသောဘိတ၏ ပုံ)
၂၀-၃-၂၀၁၃-ညနေ ငါးနာရီခန့်မှာ ကျဆုံးခဲ့ရရှာသော ဦးပဉ္စင်းကြီး ဦးသောဘိတသည် သာစည်မြို့နယ်၊ ဟံဇားအုပ်စု၊ ဟံဇားကျေးရွာ၊ မိုးကောင်းကျောင်းတိုက်မှာ သတင်းသုံးနေထိုင်သူ ဖြစ်ပါသည်။
သက်တော်(၄၅)နှစ်အရွယ်၊ သိက္ခာ(၂)ဝါ၊ တောထွက် ဦးပဉ္စင်းကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် သဲတောမြို့ အရှေ့ဘက် ဒုန်းကုန်းရွာဇာတိ ဖြစ်ပြီး၊ ဦးမြရင်+ဒေါ်အိတို့၏သား ဖြစ်ပါသည်။ ငယ်စဉ်က သဲတောမြို့ မြနှင်းဆီစာသင်တိုက်မှာ ပထမငယ်တန်း အောင်မြင်သည်အထိ ရှင်သာမဏေဘဝဖြင့် ပညာဆည်းပူးကာ လူဝတ်လဲသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လူအမည်မှာ မောင်တင်ထွန်း ဖြစ်ပါသည်။ ဟံဇားရွာ မိုးကောင်းကျောင်း ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍိစ္စသည် ကွယ်လွန်သူ ဦးသောဘိတနှင့် သဲတော်မြို့ မြနှင်းဆီစာသင်တိုက်မှာ စာသင်ဘက် သူငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည်။ ဦးသောဘိတသည် ဇနီး ဒေါ်…..နှင့် သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ၄င်းသည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဦးပဏ္ဍိစ္စထံ လာရောက်ရဟန်းခံသည်မှာ (၂)နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀-၃-၂၀၁၃-ရက်နေ့ ညနေ(၄း၃၀)ခန့်တွင် ကလေးသူငယ်လေးများ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းအတွက် စာအုပ်လိုအပ်နေ၍ မိတ္ထီလာသို့ စာအုပ်လာဝယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းတွင် ကလေးငယ်(၂၀၀)ကျော်ရှိပြီး (၃၈)ဖြာမင်္ဂလာ စာအုပ်က (၁၃၀)သာရှိသောကြောင့် သင်တန်းဆင်းသည်နှင့် ချက်ချင်း အရေးပေါ်ဈေးတက် ဝယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုင်ကယ် မောင်းသူမှာ ဦးတင်မောင်ဝင်း(ခ)ကုလား ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်း၏(၄)နှစ်အရွယ် သမီးလေးကလည်း ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းတက်နေသည့် အပြင် ဦးသောဘိတသွားလေရာ ဦးတင်မောင်ဝင်း(ခ)ကုလား အသက်(၄၀)ကို ခေါ်သွားလေ့ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
ဦးကုလားရော ဦးသောဘိတပါ မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို လုံးဝမသိရဘဲ ဝယ်နေကျဖြစ်သော မိတ္ထီလာဈေးအနောက်ဘက် “ကျော်ဇောလင်း”ဆိုင်မှာ (၃ဂ)ဖြာ မင်္ဂလာစာအုပ်ဝယ်ဖို့သာ စိတ်ထက်သန်နေ သည်ဟု သိရပါသည်။
ဦးသောဘိတသည် အနီးအနားသွားလျှင် ဆိုင်ကယ်နောက်ခုံမှာ ဘေးတိုက်ထိုင်စီးလေ့ရှိပြီး၊ မိတ္ထီလာသွားရာတွင် ခရီးဝေးသောကြောင့် နောက်မှ ခွထိုင်စီး၍ သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ညနေ ငါးနာရီခန့် တော်ဝန်နန်းစားသောက်ဆိုင် မီးပွိုင့်အတက်တွင် လမ်းမကြီးဘေး ဝဲဘက်ယာဘက် ပလက်ဖောင်းပေါ်၌ ဓားများ၊ စတီးလ်လုံးများ၊ သံလုံးများ ကိုယ်စီကိုင်ဆောင်ထားသော မူဆလင်လူတန်းရှည် ကြီးကို တွေ့ရှိလိုက်ရာ ဦးတင်မောင်ဝင်း(ခ)ကုလားက “အခြေအနေ မကောင်းဘူး၊ ပြန်လှည့်ရအောင်”ဟု ဦးသောဘိတကို ပြောပါသည်။
(ရင်ခွဲရုံမှ ဦးသောဘိတ၏ ပုံ)
ဦးသောဘိတက “သူတို့အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်တာနေမှာပါ။ ကျုပ်ပါပါတယ်။ ဆက်သာမောင်းပါ”ဟု ပြောဆို၍ ဆက်မောင်းရာ မေတ္တာကားဂိတ်လမ်းမပေါ်တွင် ဖျက်ဆီးခံထားရသော ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေသည်ကို တွေ့ကြရပါသည်။
ထုံးအိုးကြီး ကွမ်းယာဆိုင်ဒေါင့်အရောက်တွင် ကောက်ဆွ(ခရင်း)ကြီး ကိုင်ထားသော မူဆလင်တစ်ယောက် ဘယ်ဘက်ပလက်ဖောင်းမှ ဖြတ်ကူးလာသည်ကို ဆိုင်ကယ်မောင်းသူ ဦးတင်မောင်ဝင်း(ခ)ကုလားက ဘက်မှန်ထဲမှ တွေ့မြင်လိုက်ရပါသည်။
ထိုကောက်ဆွကြီးဖြင့် အားကုန်လွှဲ၍ ရိုက်ချလိုက်ရာ အုံးခနဲ အသံကြီးနှင့်အတူ ဦးသောဘိတ ခန္ဓာကိုယ်က ဦးတင်မောင်ဝင်းပေါ်ကို ပိကျသွားပါသည်။ ဦးတင်မောင်ဝင်းရော ဦးသောဘိတကပါ “သာစည်ကပါ၊ ဟံဇာကပါ၊ စာအုပ်လာဝယ်တာပါ။ ဘာမျှ မသိရပါဘူး။”ဟု တောင်းတောင်းပန်ပန် မေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆိုင်ကယ်ဘီလှိမ့်ရုံသာ ဖြေဖြေလေးမောင်းထားပါသည်။ ရှေ့တည့်တည့် လမ်းမကြီးပေါ်တွင်လည်း ကုလားအုပ်ကြီးက ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။
ထိုတောင်းပန်နေချိန်မှာပင် ဦးသောဘိတ၏ ဘယ်ဘက်နားထင် လေးခွမှန်သွားပါသည်။ ကျောကုန်းကို တဗုန်းဗုန်း ရိုက်သံကြားနေရပါသည်။ ဓားဖြင့်ခေါင်းကို လွှဲခုတ်လိုက်သည်ကို မြင်လိုက်ရပါသည်။ ဦးသောဘိတ ဘယ်ဘက်ကို ခွေခွေလေး ပြုတ်ကျသွားပါသည်။ ဆိုင်ကယ်ဒေါက်ထောက်ပြီး ဦးသောဘိတကို ပွေ့တင်ပါသည်။ အသက်(၁၃/၁၄)နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်ပြေးလာပြီး ဦးသောဘိတကို ပွေ့ထူပေးပါသည်။ နာရွက်အထက် နောက်စေ့မှ သွေးတွေ ဒလဟော စီးကျနေပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ပျော့ခွေနေရာ လုံးဝတင်လို့ မရတော့ပါ။
ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင် ပွေ့တင်နေစဉ် ဆိုင်ကယ်ကို ဓားနှင့်ခုတ်၊ ခြေနှင့်ဆောင့်ကန်ရာ ရှေ့ဘီးတာယာ ပျက်စီးသွားပြီး၊ လက်ကိုင်နှင့် ရှေ့ပိုင်းလည်း ဓားထိသွားပါသည်။ ဆိုင်ကယ်လည်း လဲကျသွားပါသည်။ ဦးတင်မောင်ဝင်း လှည့်ကြည့်စဉ် ကောက်ဆွကြီးနှင့် ပထမဦးဆုံး ရိုက်သည့်ကုလားကြီးက ငါးဂါလံဆံ့ အဝါရောင် ပုံးတစ်ပုံး ထမ်းလာရင်း “မီးရှို့မီးရှို့”-ဟု အော်ပြေးလာသည်ကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။
ထိုစဉ် “ဒကာကြီးလွတ်အောင်ပြေး”ဟု ဦးသောဘိတက အားကုန်အော်ပြောပါသည်။ ဦးသောဘိတကို ပွေ့ထူဖို့လာသော ဘောင်းဘီတို ဝတ်ထားသော ကလေးလေးကလည်း “ဦးလေးပြေးတော့ ပြေးတော့”ဟု အော်ပြောပါသည်။
ဦးသောဘိတအား သဲကြီးမဲကြီး ရိုက်နှက်နေကြ ချိန်တွင် ဦးတင်မောင်ဝင်းကို လုံးဝ ပစ်မှတ်မထားပါ။ ဦးတင်မောင်ဝင်းကို အသားကညို၊ မုဆိတ် ပါးပြိုင်းမွှေးတို့ကလည်း ရှိနေ၍ ကုလားဟု တင်ပုံရပါသည်။ ဦးတင်မောင်ဝင်းလည်း ဆိုင်ကယ်မောင်းပြေးရာ ခဲတွေ၊ တုတ်တွေ၊ ဓားတွေနှင့် ပစ်ပေါက်ထုနှက် ကြပါတော့သည်။
“အဲဒီကောင် ဗမာ လိုက်.”ဟု ပြောသံတွေကြားရပြီးမှ ခဲမိုးတွေရွာခြင်း၊ တုတ်ဆွမ်းဓားဆွမ်း လောင်းကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ကယ်သုံးချက် အခုတ်ခံလိုက်ရပါသည်။
တံတားထိပ်ရောက်သည့်အခါ မြန်မာလူအုပ်ကြီးနှင့် တွေ့ပါသည်။ “ကယ်ကြပါဦး၊ ဦးဇင်းတစ်ပါး အသက်ခံရပြီ” ယဉ်ကျေးမှု စာအုပ်လာဝယ်တာပါဟု ပြော၍ အကူအညီတောင်းလိုက်ပါသည်။ လက်နက်မပါသည့် မြန်မာလူအုပ်ကြီး တုတ်ဓားလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသော ကုလားလူအုပ်ကြီးဘက် ထွက်ခွါသွားပါသည်။
"ဦးသောဘိတရေ… အမျှ…အမျှ...." အပိုင်း (၂)
by Wira Thu (Notes) on Monday, March 25, 2013 at 3:23pm
ဦးတင်မောင်ဝင်း (ခ) ကုလားသည် အသက် (၄၀)နှစ်ရှိပြီး ဇနီးမှာ ဒေါ်သန်းသန်းမိုး ဖြစ်သည်။ လေးနှစ်သမီးလေးအမည်မှာ မနဒီဝင်းဖြစ်ပြီး ပျံလွန်သူ ဦးသောဘိတ ထံမှာ (၃၈)ဖြာ မင်္ဂလာတရား သင်ယူနေသည့် ကလေးငယ်ဖြစ်သည်။ ဦးတင်မောင်ဝင်းတို့ မိသားစုသည် ယက္ကန်းအလုပ်ရော တောင်သူအလုပ်ပါ လုပ်ကိုင်အသက်မွေးကြသည်။
ဦးတင်မောင်ဝင်းလွတ်မြောက်သွားချိန်တွင် ဦးမျိုးဝင်း (ဖိနပ်ရောင်းဝယ်ရေး - ဇနီး မယု) ဦးအဏ္ဏဝါတို့က ဓားဖြင့် ခုတ်ကြပြီး ဦးညီညီက ဓာတ်ဆီပုံး ယူလာကာ အပေါ်ရုံသင်္ကန်းဆွဲချွတ်ကြသည်။ ပက်လက်လန်နေသော ဦးသောဘိတကို မျက်နှာပေါ်မှစ၍ ဗိုက်ပေါ်နှင့် တစ်ကိုယ်လုံးပေါ် ဓာတ်ဆီလောင်းကြသည်။ ပုံးလိုက်သွန်းလောင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရေခွက်လေးများ ကိုယ်စီကိုင်၍ လောင်းကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းနောက် မီးရှို့ပစ်လိုက်ကြသည်။ ထိုသို့ ဓားခုတ်၊ မီးရှို့နေကြသည်ကို သုခမြိုင်တည်းခိုခန်းနှင့် သုခမြိုင် လဘက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် မြန်မာမိသားစုများကလည်း မြင်ကြသည်။ ၎င်းလဘက်ရည်ဆိုင်ထဲသို့ ရောက်ရှိနေသော ဦးစိုးသိန်း ဗန္ဓုလ ကားစပယာ၊ ဇနီး ဒေါ်ဝေမာလွင်တို့လည်း မြင်ကြသည်။ သုခမြိုင် လဘက်ရည်ဆိုင်မှ လဘက်ရည်ဖျော်ဆရာ ဦးကိုလင်းကလည်း မြင်ရသည်။ ၎င်းတို့ကို မွတ်ဆလင် လူအုပ်ကြီးက ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်ကြ၍ ရပ်ကြည့်နေသူများ ထွက်ပြေးကြရသည်။
မြန်မာလူအုပ်ကြီး ချီတက်လာသည့်အခါ မွတ်ဆလင်များက ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်ကြသည်။ လေးခွနဲ့ ပစ်ခတ်ကြသည်။ မြန်မာလူအုပ်ကြီး နီးလာသည့်အခါ မွတ်ဆလင်များ ထွက်ပြေးကြသည်။ မွတ်ဆလင်များ ထွက်ပြေးသည့်အခါ ခဲထုခံရ၍ ပုန်းရှောင်နေသော မြန်မာမိသားစုများ ပြန်ပြေးလာကြစဉ် ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ရာတွင် ပါဝင်သော ဦးဖိုးချိုး (မွတ်ဆလင်)က ဦးသောဘိတ ကိုယ်ပေါ်မှ မီးများကို ပုဆိုးဖြင့် အုပ်၍ ငြှိမ်းသတ်နေသည်ကို တွေ့ရပြန်သည်။ ထို့နောက် သူလည်း ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသည်။
မြန်မာလူအုပ်ကြီးက ဗလီထဲဝင်ပြီး မီးရှို့ကြသည်။ ရပ်ကွက်ထဲမှ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေါ် လူ (၄)ယောက်က ဦးသောဘိတကို ပွေ့တင်ပေးကြသည်။ ဆိုင်ကယ်မောင်းသူမှာ ဦးဝင်းဇော်ဦး ဖြစ်ပြီး ဦးသောဘိတကို ပွေ့ချီ၍ ဆိုင်ကယ်နောက်မှ ထိုင်လိုက်သွားသူမှာ ကိုအောင်မင်းသူ ဖြစ်သည်။ ဦးသောဘိတသည် စကားမပြောနိုင် အသံမပြုနိုင်တော့သော်လည်း အသက်ငွေ့ငွေ့ ရှိသေးသည်ဟု ဆိုသည်။ အပေါ်ရုံသင်္ကန်းနှင့် သွေးကွက်သည် တစ်ခြား၊ မီးလောင်ကျွမ်းနေသည့် ဦးသောဘိတက တစ်ခြား ဖြစ်နေသည်။ ဦးသောဘိတ၏ ကိုယ်မှာပတ်ထားသော သင်းပိုင် သင်္ကန်းလိပ်မှ သင်္ကန်းစ တစ်စ နှစ်စသာ ကျန်ခဲသည်ကို တွေရသည်။
(ဓားနဲ့ အခုတ်ခံထားရသော ဆိုင်ကယ်ရှေ့ဘီးကို မိတ္ထီလာတွင် စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီး ဘီးသစ် လဲလာခဲ့သည်။ ဒုလ္လဘ ခံထားသည်မှာ နှစ်ရက်သာ ရှိသေးသော ဦးတင်မောင်ဝင်းနှင့် ၎င်း၏ အိမ်သည် သာစည်မြို့နယ် ဟံဇားရွာတွင် တည်ရှိသည်။)
“ဦးသောဘိတရေ….. အမျှ….. အမျှ……” အပိုင်း (၃)
by Wira Thu (Notes) on Wednesday, March 27, 2013 at 4:01pm
(၂၀-၃-၂၀၁၃) ည (၉)နာရီ ခန့်တွင် နာရေးကားဖြင့် လူနာများမကြာခဏ လာရောက်သယ်ယူသွားကြပါသည်။ အများအားဖြင့် ဓားခုတ်ခံရသူကများပြီး ဒဏ်ရာမပြင်းထန်သူ အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ ဆေးရုံသို့ ဒဏ်ရာလာကြည့်သူများ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွား၍ စုံစမ်းရာ “မီးရှိုခံရသည့်ဘုန်းကြီး သေသွားပြီ”ဟု အော်ဟစ်ပြောဆိုသံများကြောင့် လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဦးသောဘိတသည် (၉း၄၅) မှာ ပျံလွန်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပျံလွန်သည်အထိ ဦးခေါင်းနောက်စေ့မှ သွေးများ ဒလဟောကျဆင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်ခုံပေါ်မှာတင်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဦးသောဘိတ သတင်းသုံးရာ ဟံဇားရွာလည်း ရွာသူ/သားများ ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြင့် နားစွင့်နေကြပါသည်။ အသတ်ခံရပြီ ဟု ကြားသူကကြား၊ ပိတ်မိနေသည် ဟု ကြားသူကကြားနှင့် ကောလာဟလ လိုလို ဖြစ်နေပါသည်။ ဦးသောဘိတနှင်အတူ ဖုန်းပါမသွား၍ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ည နှစ်ချက်တီးကျော်မှ ဦးသောဘိတရွာ ဟံဇားရွာ မိုးကောင်းကျောင်းဆရာတော်ထံ သတင်းအတိအကျရောက်လာပါသည်။ရွာဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သူက လာလျှောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ မနက် (၅) နာရီတွင် သာစည်မြို့မှ ကားဖြင့် မိုးကောင်းကျောင်းဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိစ္စကို ပင့်ပါသည်။ ဦးပဏ္ဍိစ္စနှင့်အတူ ရွာဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သူ၊ ဦးကောင်းတို့လည်း လိုက်လာကြပါသည်။
မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ နဂါးရုံဘုရား ဓမ္မာရုံထဲမှာ မြို့နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်/ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဝန်ကြီးချုပ် ရဲမြင့်တို့ကိုပါ တွေ့ရပါသည်။ မိုးကောင်းဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိစ္စက အလောင်းပြန်တောင်းပါသည်။ အလောင်းကို အကြောင်းပြုပြီး အဓိကရုဏ်းကြီးထွားမည်စိုး၍ မပေးနိုင်ကြောင်း လျှောက်ကြပါသည်။ ထိုအခါ ဦးပဏ္ဍိစ္စက “တရားခံကို ဖော်ထုတ်ပေးရမယ်။ ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးရမယ် သို့သော် အသေစား သေစေ သဘောမျိုး လုံးဝမဟုတ်ပါ”ဟု တောင်းဆိုပါသည်။ အာဏာပိုင်များက ကတိပေးကြပါသည်။
ရင်ခွဲရုံရောက်တော့ (၁၂)နာရီ ထိုးပါပြီ။ အလောင်းကြည့်ခွင့် ရပါသည်။ အဝတ်အစား မပါ ဗလာကိုယ်တည်း ထားသည်ကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။ ဦးခေါင်းမှ ဓားခုတ်ရာကို ပြန်ချုပ်ပေးနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အသေအချာ ကြည့်လိုက်သည့်အခါ ဦးသောဘိတ၏ အင်္ဂါဇာတ်ကိုပါ ဓားဖြင့် လှီးဖြတ်ထားသည်ကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။
ရန်အောင်မြင်ရပ်ကွက်မှ နာရေးအသင်းကားနှင့်ပင် အလောင်းတင်ပါသည်။ မြင်တော်ကန် သင်္ချိုင်းမှာ သင်္ဂြိုဟ်ပါသည်။ ဦးသောဘိတ၏ ဇာတိရွာ (ညောင်ဦးဖီးအုပ်စု၊ ဒုန်းကုန်းရွာ) ရွာသူ ရွာသားများ ဟိုင်းလက်တစ်စီးဖြင့် လိုက်ခွင့်ရပါသည်။ ဦသောဘိတ၏အစ်ကို ဦးထွန်းမြင့်နှင့် ဦးသောဘိတ၏ မယားဟောင်း တို့လည်း ပါလာကြပါသည်။
by Wira Thu (Notes) on Friday, March 29, 2013 at 12:55pm
ဦးပဉ္စင်း ဝီရသူသည် မွတ်ဆလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ မွတ်ဆလင်မ်မုန်းတီးရေး ဟု မီဒီယာများမှာ တွင်ကျယ်စွာ ပြောကြားနေကြသော အမျိုးသားရေးတရားတော်များကို ဟောကြားခဲ့၍ ထောင်ကျခံခဲ့ရသူ ၊ ထောင်မှလွတ်မြောက်ပြီးသည့် ယခုအခါ၌လည်း လှည့်လည်ဟောကြားနေသူ ဖြစ်ပါသည်။
ဦးပဉ္စင်း ဝီရသူသည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြသည့် မွတ်ဆလင်မ်အားလုံးကို ရည်ရွယ်ဟောကြားခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်၊ သွေးဆာ၊ သွေးတောင်း၊ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းသော စရိုက်ဆိုး၊ အကျင့်ဆိုးများဖြင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စော်ကားနေသူများကိုသာ ရည်ရွယ်ဟောကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့၊ အမျိုးသား လုံခြုံရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာ စော်ကားမခံရအောင် သတိ ဝီရိယနှင့် နေထိုင်ကြဖို့ အသိပေး နှိုးဆော်ရေးကိုသာ ရည်ရွယ်ဟောကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပဲခူးတိုင်း၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ မြို့လှမြို့နေ စိတ်မနှံ့သူ မြန်မာအမျိုးသမီး မုဒိမ်းကျင့် ခံရမှု (8.8.2012)
မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ Golf-အပိုပစ္စည်း အရောင်းစာရေးမလေး မုဒိမ်းကျင့် ခံရမှု (17.8.2012-ကိုင်တွယ်)
ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်၊ သာယာကုန်းရွာ၊ ဆွံ့အ သူမလေးကို မုဒိမ်းကျင့်မှု(24-2-2012)
မကွေးတိုင်း၊ ကန်ဖျားရွာ၊ အိမ်ဖော်မလေး တစ်ယောက်ကို လိင်ကိုင်ခိုင်းမှု (5-11-2012)
မြင်းမူမြို့၊ ဆယ်တန်းကျောင်းသူမလေးကို ခိုးယူပေါင်းသင်းမှု၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ စွယ်ကွေ့ရွာ ဆယ်တန်းကျောင်း သူမလေးကို ခိုးယူပေါင်းသင်းမှု၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်သာရွာ၊ ခုနစ်တန်းကျောင်းသူမလေးကို ခိုးယူပေါင်းသင်းမှု၊ မန္တလေး၊ အောင်ပင်လယ်မြို့သစ်၊ ခုနစ်တန်းကျောင်းသူမလေးကို ခိုးယူပေါင်းသင်းမှု၊
မိတ္ထီလာ၊ ဝန်ဇင်း(၃)ရက်ကွက်၊ အဝတ်လျှော်စားသူ မဇင်မာဌေးကို အုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်နှက်မှု(21-11-2012)၊ မိတ္ထီလာ တူရကီသူရဲကောင်းဗိမာန် ကိစ္စ။
မန္တလေး၊ အောင်မြေသာစံ၊ ကြက်ကုလားများ ခြိမ်းခြောက်သောင်းကြမ်းမှု(15-1-2013)
မန္တလေး၊ ကျောက်ဝိုင်းအတွင်း၊ သစ်သီးသည်မြန်မာ အမျိုးသမီးကို မျက်မှန်ဆိုင်မှ မွတ်ဆလင်မ်အမျိုးသားက တုတ်နှင့်ရိုက်၊ လက်သီးနှင့်ထိုးကြိတ်မှု (10-3-2013)
သာစည်မြို့နယ်၊ အိမ်ဂရံအတုလုပ်၍ အိမ်ရှင်မြန်မာ အမျိုးသမီးကို မောင်းချမှု၊ (22-11-2012)
ကန့်ဘလူ သုသာန် ပြဿနာ၊ ရွှေပြည်သာ သုသာန်ပြဿနာ၊ ဟင်္သာတ သုသာန်ပြဿနာ၊ စဉ့်ကူးကျုးကျော်ဗလီ၊ ရမည်းသင်းကျူးကျော်ဗလီကိစ္စ အပါအဝင် အမှုပေါင်း(၁၀၀)ကျော် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။ အချို့မှာ အောင်မြင်မှုရရှိပြီး၊ အချို့မှာ အမှုရင်ဆိုင်ဆဲ၊ တင်ပြထားဆဲများ ဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်းဆက်၍ အကူအညီတောင်းသူ၊ စာရေး၍ အကူအညီတောင်းသူ၊ အွန်လိုင်းမှ ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းသူ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများကိုလည်း ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ တရားသောနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းဖို့သာ အကြံပြုခဲ့သည်ချည်း ဖြစ်ပါသည်။
သာကေတတွင် ခုနစ်တန်းကျောင်းသူမလေး မုဒိမ်းကျင့်ခံရမှု၊ အမရပူရမြို့မှ ဦးဇင်းလေးများကို မန္တလေးမြို့မှ မွတ်ဆလင်မ် ညီနောင်မိသားစုက တရားရုံး အပြင်ဘက်တွင် ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြစွာ ဆဲရေးတိုင်းတွာ စော်ကားမှု၊ ပထမအကြိမ် ရခိုင်အကြမ်းဖက်ခံရစဉ် ကာလအတွင်း ကျောက်မဲမြို့မှ သူနာပြုဆရာမလေးကို ခိုးယူပေါင်းသင်းပြီး ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်း တစ်ယောက်မျှ မသိရဘဲ အစ္စလာမ်ဘာသာထဲ တိတ်တဆိတ်သိမ်းသွင်းမှုနှင့် ကလေးမြို့မှ မဝါဝါမြင့်ကို မွတ်ဆလင်မ် ရန်မဇန်း(ခ)ကျော်ဝင်းက ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ပြီး ဘာသာသာသနာကို စော်ကားမှုတို့သည် အဓိကရိုဏ်း ဖြစ်လောက်အောင် ကြီးမားသော တော်တန်ရုံ လူသားတို့ သည်းခံနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းသည့် ဧရာမပြစ်မှုကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။
ပထမအကြိမ် ရခိုင်အရေးအခင်းတွင် ရခိုင်အမျိုးသားများ၊ ရခိုင်အဖိုးအဖွားများ၊ ရခိုင်သမီးပျိုများ၊ ရခိုင်ကလေးများ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရ၍ အတုံးအရုံး သေဆုံးကြရ၍ မခံမရပ်ဖြစ်နေကြသော ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအများ အမျိုးသမီးများပါ မကျန် စားမရ၊ အိပ်မရ ဒေါသထွက်၍ ကူညီရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့နှင့် ပြည်မမှာ သည်လိုပုံစံမျိုး ဖြစ်ခွင့်မရလေအောင် ကာကွယ်ဖို့သာ ဆုံးမညွှန်ပြခဲ့ပါသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် ဦးပဉ္စင်းနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသော မြို့ရွာများနှင့် ဦးပဉ္စင်းတို့ နေထိုင်ရာ မန္တလေးမြို့ကြီးမှာ ယခုအချိန်ထိ တည်ငြိမ်အေးချမ်း နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စု တစ်ဝှမ်းလုံးမှ တိုင်းရင်းသားများသည်လည်း ဦးပဉ္စင်း ဝီရသူကဲ့သို့ပင် အကြမ်းမဖက်ဘဲ ဥပဒေဘောင်အတွင်းရှိ ထိရောက်သော နည်းစနစ်များဖြင့် ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာနှင့် ကိုယ့်သာသနာကို ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် ကာကွယ်ကြစေလိုပါသည်။ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဖြေရှင်းလျှင် ပြီးနိုင်သည့် သာမန်ပြဿနာလေးများကို အကြောင်းပြု၍ အဓိကရုဏ်းအသွင် အမျိုးသားရေး ပြဿနာတစ်ရပ်အသွင် မဖန်တီးမိကြဖို့ လိုပါသည်။ ဦးပဉ္စင်းတို့ သာသနာသည် သွေးစွန်းသော သာသနာအဖြစ် သမိုင်းတွင် အစွန်းအထင်း မခံစေချင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/29/20132အကြံပြုခြင်း
sender mail address pine pine(ppine22@gmail.com) (ဝီရသူ........ အမင်္ဂလာပါ မင်းအသားကဖြူတယ်နော် အချည်ရည်နဲ့ တို့စားရင်ကောင်းမှာပဲ မင်းရဲ့လယ်ပင်းက သွေးသောက်ချင်နေတဲ့လူ တစ်သန်းကျော်ရှိတယ် လူများတော့ မင်းသွေးလောက် မှာ မဟုတ်ဘူး သွေးအားကောင်းအောင် လုပ်ထားပါ မင်းစံပြ ပုံစံပေးစာရင်းထဲမှာ မင်းပါနေတယ်... သတိထားနော် သွားတဲ့နေရာ၊ စားတဲ့နေရာ အစစအရာရာ မင်းကို အရမ်းချစ်တယ် ............)
ရေး/ဆို-Milla Dawt Hniang
So i wrote this song about3months ago. It was previously planned for this song i've written for Aung San Suu Kyi along withaletter i wrote to her be sent to her in Burma. However, it saddens me i now know that my song and letter was not given to her like i was promised. I guess i feel that it's only appropriate i share my song with everyone now. Aung San Suu Kyi is one of my biggest heroes and i wrote this song for her especially after i learned about her life inadeeper level. And since i sing & write country music, the way i've written the song is probably very different than any other songs i've written before. I wanted to make it about HER life story but of course inasong format.
I hope you guys will like this song.
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် ၁/ ၂၀၁၃ ကို ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ကနေ ဒီနေ့အထိ မြို့နယ် ၁၅ မြို့နယ်မှာ လူစုလူဝေးဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု ၁၆၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၄၃ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၈၆ ဦးရှိကြောင်း၊ အဆောက် အဦ ၁၃၅၅ လုံး နဲ့ ယာဉ်မျိုးစုံ ၃၉ စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးကြောင်း၊ လူဦးရေ ၁၁၃၇၆ ဦး အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၆ ခုမှာ လူဦးရေ ၉၀၆၅ ဦးကို စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ ၆၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး ဥပဒေနဲ့ အညီအရေးယူရန်ဆောင်ရွက် နေကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြစ်မှု ၁၇ မျိုးနဲ့ကို ဖော်ပြထား ပြီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများက လူစုခွဲခိုင်းလို့ လူစုမခွဲဘူးဆိုရင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၈ အရ မြို့ပြ အင်အားကို အသုံးပြုပြီး လူစုခွဲနိုင်ကြောင်း၊ ထိုသို့ လူစုခွဲရာတွင် လက်နက် ကိုင်မဟုတ်သူ များကိုလည်း အကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်သူလူထုက ပါဝင်ကူညီရန်လိုကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံကို မနက်ဖြန်သတင်းစာများမှာ ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
မည်သည့်အရပ်မည်သည့်နေရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ခဲရမ်း၊ ရိက္ခာစုဆောင်းပါ။ ရန်သူကိုအပြတ်အသတ်ရှင်းလင်းပါ။ အလ္လာရှင်မြတ်ရန်သူသင့်ရန်သူကိုနှလုံးသားတည့်တည့်ပစ်ပါ။ အလ္လာရှင်မြတ်ကိုမယုံကြည်သူမှန်သမျှကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းပါ။
အလ္လာ အရှင်မြတ်၏ ဟောကြားလမ်းညွှန်ချက်များအားမလိုက်နာသူများအားပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း။
တနိုင်ငံလုံးအလ္လာရှင်မြတ်နှင့် အစ္စလမ်သာသနာကိုဆန့်ကျင်သူများ၏လည်ချောင်းသွေးဖြင့်ခြေဆေးပါ။ အလ္လာရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်နာခံသူကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါ။
(အငြင်းပွါးစရာမလို၊ အလ္လာအရှင်မြတ် ကိုသာယုံကြည်ပါစေ။)**
********* ****** ********* ******* ******* ********
post by Minmaha Bagan on facebook
ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ တပ်မတော်က အကြွေးအလွန်ထူနေသောကြောင့်ထွက်ပေါက်ရှာရေးမဟာဗျူဟာခင်းခဲ့ကြသည်။
ဂျင်ဝက်၏ ချီးကျူးထောပနာပြုမှုအတွက် အမြတ်ထွက်အောင် ဘဘကြီး ဗိုလ်ရွှေကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံပြီး ရှေးမြန်မာအနာဂတ်အတွက် အကြေလည်ရှင်းပြပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း ဂျင်ဝက်နှင့် နိုင်ငံတကာသို့ လက်ဆောင်ပါးလိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဒေါသလျော့ဖို့နှင့် ဥာဏ်ကျယ်ကျယ်ဖြင့်စဉ်းစားဖို့ ဂျင်ဝက်က တိုက်တွန်းသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဥပဒေဘောင်အတွင်းထဲမှ နိုင်ငံရေးနှင့် မိမိယုံကြည်ချက်ကို လုပ်ကိုင်ရန် ဂျင်ဝက်က မေတ္တာရပ်ခံသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂျင်ဝက်တို့ ဆွေးနွေးပွဲ အခြေတော်တော်မလှပဲ ရုတ်သိမ်းခဲ့ရသည်။ (အမေရိကန်သံရုံးမှ၎င်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနသို့ ပေးပို့သော သတင်းအား ၀ီကီလိက ဖေါက်သယ် ပြန်ချခဲ့သည်)။
ထိုကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါ၇ီလတွင် ဗိုလ်ချုပ်မြင်အောင်အား ၄င်း၏ အောက်လက် အရာ၇ှိဖြစ်သူ ယခု ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ညွန်ကြားမှုအောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်၇န် ဗိုလ်သန်းရွှေမှညွန်ကြားမှုအား လက်မခံနိုင်ဖြစ်ပြီး ဆင်ခြေပေးထောက်ပြမိရာမှ ထောင်နန်းစံသူအဖြစ်သို့ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရ၏။ အကြောင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မြင်အောင်သည် တရုတ်ပြည်အား မြန်မာ အစိုရမှ အလုံးစုံကြောက်၇ွံ့မှီခိုအားထားနေမှုအား တပ်မှူးများ၏ အစည်းဝေးအချို့တွင် မကြာခဏ ထောက်ပြလေ့ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
တရုတ်ပြည်မှ ပိုပြီးယုံကြည်မှုရစေ၇န်နှင့် မိမိအား အကာကွယ်ပေးရန် ဗိုလ်သန်းရွှေအပါဝင် စစ်ဝန်ကြီးများနှင့် တကွ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း၇ှင် ခရိုနီများဖြင့် စက်တင်ဘာလ (ရ)ရက်နေခင်း ၁၀ နာရီတွင် စိတ်ကောက်တော်မူနေသော တရုတ်သမ္မတ ဟူချင်တောင်းနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ၄င်းပြုလုပ်ထားသော ဗျူဟာ များအား အသေးစိတ် တင်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော် သတင်းဌာနများနှင့် သံတမန်ရပ်ကွက်များတွင် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲများအကြောင်းကို သာ ကူညီဆောင်ရွက် လက်တွဲဖို့၇ှိကြောင်း တင်ပြထားခဲ့သည်။ (China lauds 'friendly' Myanmar as junta leader arrives By Dan Martin (AFP) – Sep 7, 2010) ဆောင်းပါးကို ပြန်လည် ဖတ်ရှု့နိုင်သည်။
ထို့အပြင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကပင် တရုတ်တို့နှင့် သဘောတူခဲ့သော နှစ် ၅၀ ကြာ စာချုပ်ဖြင့် ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသမှ ရှည်လျားကွေးကောက်သော ဂစ်ပိုက်လိုင်းကြီး၏ လုံခြုံရေးသည် အလွန်အရေးပါသော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွှေးကောက်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားသည့်နောက် တရုတ်စီးပွားရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအား ထိကပါးရိကပါး အခြေနေသို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သော မြစ်ဆုံရေကာတာ ဖြစ်သော အမြင့်ပေ ၄၅၈ ရှိပြီး အလျားပေ ၄၂၉၇ပေခွဲရှိသည့် ရေကာတာကြီးအား မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးမှ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြကြရာမှ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေဖြင့် လူထု ယုံကြည်မှုအား ၄င်းမှ တည်ဆောက်ပြရန်အလို့ဌာ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ နေခင်း ၁၁ နာ၇ီတွင် ကြေငြာချုက်ထုတ်ခဲ့သည်ကို တရုတ်ပြည်အစိုးရ အထင်မမှားစေရန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် အား တရုတ်ပြည်သို့ အောက်တိုဘာလ တွင်စေလွှတ်တောင်းပန်ခိုင်းကာ နှစ်သိမ့်မှုလုပ်ခဲ့ရ၏။
ထိုနောက် ရခိုင်ဒေသ မှ သွယ်တန်းမည့်ဆောက်လုပ်နေသော ဂစ်ပိုက်လိုင်းကြီး၏ လုံခြုံရေးအတွက် အောက်လမ်းနည်းဖြင့် မသမာသော အစီမံများလုပ်ဆောင်ရန် အသေးစိတ်အစီစဉ်များအား တရုတ်သို့ တင်ပြခဲ့ပြီး၊ ရခိုင်ဒေသအတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများအား စတင်အကောင်ထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရန် ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းတို့ အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မည့် အစီစဉ်များ စတင်ခဲ့သည်။
ဦးအောင်သောင်းတို့ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးတမန်တော်ကြီးအဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဂျွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ စစ်ဘက်မှ ကေအိုင်အေတို့ နေရာယူထားသော တာပိန် ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားစက်ရုံတည်ရှိရာသို့ သွားသော လမ်းကြောင်းမှ ဖယ်ရှားရန် တရုတ်ပြည်အစိုးရအား ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း ကေအိုင်အေနှင့်ရ ၁၇ နှစ်ကြာချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်အား စစ်ပွဲဖြင့် စတင်ပျက်ပြယ်စေခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်အား ပြန်လည်ငြိမ်းအေးရန် ကြံ့ဖွတ်နဲ့ ဦးအောင်သောင်းတို့ လုပ်လာကြသည်။ ထိုတာပိန်ေ၇အားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် တရုတ်ပြည်မှ အင်ဂျင်နီယာ ၉၀ ရာနုံန်းဖြင့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး ယူနန်ပြည်နယ် မီးလင်းရေးကို ဦးတည်ထားသော စက်ရုံဖြစ်သည့်အတွက် တရုတ်အစိုးရ၏ အထောက်ပံများ မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနောက်တွင် ရှိနေကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှ သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် အတိလင်း ရေးသားထောက်ပြထားသည်။
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မည်ဟု လေလုံးထွားခဲ့သော ၀န်ကြီးများ အရှက်ကြွဲပီး မြားဦးလှည့်လာသည်မှာ ၇ခိုင်ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြသနာ စတင်ရန် ၀န်ကြီးလက်သယ်အချို့ အာရုံစိုက်ခဲ့ရသော အကြောင်းရင်ခံတခု အခိုင်မာ တင်ပြရသော် ရခိုင်ပြည်နယ်သားများ၏ အခွင့်ရေးအရ ခံစားပိုင်ခွင့်အား ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် (ကျောက်ဖြူမြို့နယ်) ဒေါက်တာအေးမောင် (၇ခိုင် အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီဥက္ကဌ) နှင့် ဦးဘရှင်တို့ မှ ဇန်နာဝရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် နာစင်ရှိ၇ာနေရာသို့ လူထုအစည်းဝေးခေါ်ယူကာ ရခိုင်ပြည်သူများအား ရခိုင်ပြည်မှ ထွက်ရှိသော သံယံဇာတများအတွက် ခံစားခွင့်ရှိကြောင်းကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် မည်သို့ ပြဌာန်းထားကြောင်းကို စုရုံးခွင့် ရရှိသော လူထု ၅၀၀ အား ပြောကြားခဲ့သည်က စလာသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်လွတ်ခါနီ အချိန်လေးမှာပင် အမေရိကန်အစိုးရမှ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ သံတမန်ကြီး ၂ ကြိမ်နှင့် အာရှရေးဆိုင်ရာ သံတမန်ကြီး တို့ ၁ကြိမ် သွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့် ရသော အခြေနေအား ဗိုလ်သန်းရွှေတို့မှ ဖန်တီးကာ မက်လုံးပေးခဲ့သည်။ ဒေါ်စုလွတ်လာသောအခါဝယ် လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဥပဒေလမ်းကြောင်းမှပင် လျောက်လှမ်းစေရန် သံတမန်ကြီးများကလဲ ပထမဦးဆုံး သံခင်းစတင်ရေးသယ်ယူလာသော ဂျင်ဝက်ကဲ့သို့ပင် အခင်းကျင်းအထောက်ပံ့များ ပြုလုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်ကို နေပြည်တော်မှ သဘောတော်ကျနေခဲ့ကြ၏။ ထိုကာလတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွသော အသွင်များသာ ရှေ့တန်းရောက်ရှိနေပြီး တိုင်းပြည်တခုလုံး အလွန်သာယာသော အခင်းကျင်း ကြီးသဖွယ် တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကျောက်နီမှော်ရွာသားများမှ ပြသနာတစုံတရာ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပဲ သက်ဆိုင်ရာ၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုသာ မျှော်လင့်နေခဲ့သည်။ ၂၉ ရက်နေ့ မေလတွင် မသီတာထွေးအား မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်သူများဟု ယူဆရသူ ၃ဦးအား မောင်းတော ရဲစခန်း၏ ညွန်ကြားချက်ဖြင့် လာရောက်စစ်ဆေးကြောင်း သတင်လွင့်ပြီး ကျောက်နီမှော် ရယက ရုံးတွင်ပင် အကျဉ်းရုံးစစ်ဆေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ၄င်းနေရာတွင် စောင့်ကြည့်နေကြသော ၇ခိုင်အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဒေါသအိုးကို ပိုပြီး ပေါက်ကွဲလာအောင် ဒုရဲမှူး လှအေးမောင်က ဖန်တီးပြခဲ့၏။ မေလ ၃၀ ရက်တွင် ရခိုင် အမျိုးသားများ မကြေနပ်သံကျယ်လောင်ပြီး အုံးထနေသောကြောင့် ကျောက်နီမှော် ရယကမှ ရဲသို့ အကြောင်းကြားကာ အဆိုပါတရာခံ ၃ ဦးအား လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားစေခဲ့ပြီး ရမ်းဗြဲရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်မှာ သမာရိုးကျ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ထိုနောက် မှတ်ပုံတင်များတဦးခြင်းစစ်ဆေးပြီး အဆိုပါ မူဆလင် ၁၀ဦးနှင့် အခြားရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၄ ဦးကိုသာ ကားပေါ်ပြန်တက်ခွင့်ပြုပြီး ကားထွက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ တောကုတ်ကားဂိတ်တွင် မြန်မာ အမျိုးသား ၆ဦးနှင့် ရခိုင်းအမျိုးသမီး ၅ ဦးကျန်နေရစ်သည်။ မူဆလင်၁၀ ဦးတွင် ပါလာသော လက်ကိုင်ဖုန်း၃လုံးးအား ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားမှု အထောက်ထား မခိုင်လုံဟု ဆိုကာ နဆကမှ သိမ်းယူထားလိုက်သည်။
၄င်းအမှုခင်းဖြစ်ပွားလာသည်နှင့် ပိုပြီး မီးတောက်ကြီးမားလာအောင်နေ့စဉ်ထုတ်အစိုးရ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ ဂျွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်အရေးအခင်းအား အသေးစိတ်ရေးသားဖေါ်ပြထားပေးပြီး မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးသည့်အနေဖြင် ထပ်ပြီး ကြီးထွားအောင် သတင်းစာ တွင် စကားလုံး အသုံးနုံန်းများအား ခက်ခက်ထန်ထန်လုပ်ပေးလိုက်ကြ၏။
ဂျွန်လ ၈ ရက်နေ့ နေ့ခင်း ၁၂ နာရီတွင် ရွှေဇာ ဗလီသို့ ၀တ်ပြု၇န်သွားရောက်ကြသော မူဆလင်လူငယ်များအားလုံးနီးပါ ဒုတ် ဓါး လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ကာ ၄င်းဗလီကြီးအား စုရုံးသွားနေကြသည်ကို လုံခြုံရေးတာဝန်၇ှိသူနှင့် နဆက ၀န်ထမ်းများမှ ခွင့်ပြုခဲ့၏၊ အဆိုပါ နေ့ခင်း ဗလီဝတ်ပြုပြီးသော နေခင်း ၁နာရီတွင် ဘန်ဂါလီမူဆလင်များသည် ၄င်းတို့ ရွှေဇာ ဗလီမှ ထွက်လာသည်နှင့် မောင်းတောမြို့ရှိ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဘာသာဝင်များအား မီးကုန်ယမ်းကုန်တိုက်ခိုက်နေသည်ကို ညနေ ၄ နာရီအထိ လုံခြုံရေးများ ရပ်ကြည့်နေခဲ့သည်။ မောင်းတောမြို့၏ အချက်ခြာကျသော အဆောက်ဦးများ စားသောက်ဆိုင်များ နေအိမ်များ အပြင် ကမ္ဘောဇ ဘန်တို့ကိုပါ အားရပါးရ ဖျက်ဆီးခွင့်ပြုခဲ့သည်ကို arakanland.com တွင် တင်ပြထားသော ဗွီဒီယိုဖိုင်များနှင့် Eleven Media Group တို့မှ ၇ိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံအထောက်ထားများက သက်သေခံဖြစ်နေခဲ့သည်။
ထိုဖြစ်ရပ်ုကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့များတွင် ကြီးမားသော ရန်ပွဲများဆထက်တံပိုးကြီးမားခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး ဂျွန်လ ၈ ရက်နှေ့ညမှ စတင်ကာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေး ပုဒ်မ ၁၄၄ အား တမြို့ပြီးတမြို့ ထုတ်ပြန်ကာ လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်များအား ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ပထမဆုံး ထိုးသွင်းခဲ့၏။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗိုလ်သန်းရွှေ့တို့ တရုတ်ပြည်အား ဂတိပြုထားသည့်အတိုင်း တာဝန်ယူထားသော ရခိုင်ပြည်မှ သွယ်တန်းထားသည့် ဂစ်ပိုက်လိုင်းလုံခြုံရေးနှင့် ဂစ်ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းရာဒေသ ၀န်းကျင်အတွင်း အဓမ္မ လယ်မြေသိမ်းမှုများအတွက် အမှောင်ချနိုင်ရန် စစ်တပ်ဖြင့် ထိန်းကွပ်ကာ အားလုံးနေရာယူသွားနိုင်အောင် အကွက်ကျကျ စီစဉ်သည်မှာ ထင်ရှားသိသာလွန်းသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအရေးအခင်းမြင့်မားလာသောအခါ ရခိုင်တွင် ပွနေသော ဖရိုဖ၇ဲဘ၀များအားနိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန်မှုများကြီးမားလာသောအခါ နေပြည်တော်မှ သမ္မတ အပါဝင် ၀န်ကြီးများမှ အကူညီပေးရေးအား ၂၀၁၂ ဂျူလိုင်လ ၂၂ တွင် အိုအိုင်စီအား ပြည်တော်သွင်းရန်း သဘောတူခဲ့ကြပြီး အိုအိုင်စီနှင့် စာချွန်လွှာ လက်မှတ်များရေးထိုးပြကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းပြည်အနှံ ဒေါသူပုန်ထအောင် စနက်တံ မီးတို့ပေးလိုက်ကြသည်။
ဦးသိန်းစိန် (သမ္မတ) မှ တက်တက်လာခြင်း အပြောကောင်းကောင်း နွဲ့နွဲ့ကလေးဖြင့် ပြောချလာလိုက်သည်မှာ ကောင်းမွန်သော အစိုးရ၊ သန့်ရှင်းသော အစိုးရစကားလုံးမိန့်ခွန်းများအတွက် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ရှေ့နေကြီး ဦးသိန်းညွန့်မှ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သော ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လသည် နေပြည်တော်တွင်း အတွင်းကြိတ်ပုံး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွါးနေသာအခြေနေသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ သင်္ကြန်ပြီးသွားသော ကာလ အစိုးရရုံးများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သောကာလတွင် ဒုသမ္မတ ၄င်း၏ ဒုသမ္မတ အစိုးရရုံးဆိုင်ရာ ရုံးခန်းသို့ မလာတော့ပဲ မေလဆန်းတွင် နုတ်ထွက်စာ ပေးပို့ခဲ့၏။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမှ သင်္ကြန်အတက်နေ့တွင် ဦးသိန်းစိန်အား ခေါ်ယူကာ သြ၀ါဒပေးပြီး တရုတ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ရှေ့တွင် အနှောက်ယှက်မရှိအောင် သယ်ဆောင်သွားရန်နှင့် လက်ရှိ တင်ရှိနေသော နိုင်ငံတကာအကြွေးများအား အကြေလည် အပြီးပြတ် ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်ဟု တာဝန် အပြီးပြတ်ယူခိုင်းသည်မှာ ဦးသိန်းစိန် ငြင်းချက် ထုတ်နိုင်ပါမည်လော။
ဦးအောင်မင်းတို့ လက်ပံတောင်းသို့ ရောက်သွားသော ကာလ မတိုင်ခင်တွင် စီမံကိန်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေအဖြစ်သိမ်းယူထားသော အရာများအား ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်သူ ပါဝင်သူ ဦးဆောင်သူတွေအားလုံးအား ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ဖမ်းဆီးကာ တရားရုံးတွင် အနဲဆုံး ဒဏ်ငွေ ၁၀ သိန်းမှ သိန်း ၅၀ အထိ ချမှတ်ရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများသို့ လျှို့ဝှက်ညွန်ကြားခိုင်းပြီး နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား မွဲပြာကျသွားအောင် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ကိုကိုအား လွှတ်တော် ဥက္က ဦးရွှေမန်းနှင့် ငြိမ်းပွဲစားကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဦးအောင်မင်း ၏ အချိန်းအချက်နှင့် နေပြည်တော်၏ (…) ရိပ်သာတွင် ည ၉ နာရီမှ ည ၁၁း ၃၀ ထိ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။
ထိုကြောင့် လက်ပံတောင်း ပွဲနှင့် ပတ်သက်သော ကိုအောင်စိုး ဒေါ်နော်အုံးလှတို့ မည်မျှ အာမခံကြေးပေးဆောင်ရသည်ကို မေးမြန်းလျှင် အဖြေပိုရှင်းသွားပေလိမ့်မည်။ မြစ်ဆုံကိစ္စသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ရိုးရှင်းပြတ်သားသော ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပဲ ကစားကွက်တခုသာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အနောက်အုပ်စုများ၏ သဘောကျမှုကို ပထမဆုံးရယူရန်လုပ်ခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဆိုရှယ်လစ် နေ့စဉ်သတင်း ၀က်ဆိုက်က အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော လက်ပံတောင်းကတော့ ငယ်ထိပ်မြွေပေါက်ခံရမည်ကို စိုးသောကြောင့် နိုင်ငံတော်က ပါဝင်ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု (State of Terrorism) အား ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထင်၇ှားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အကာကွယ်ယူ ရှောင်ထွက်ခဲ့ကြသည်မှာ ငြင်းချက်ထုတ်စရာ လိုလောက်မည်ဟု မထင်မိပါ။
The grievances of people involved in the Letpadaung protest are similar to those raised against the massive Chinese-funded Myitsone Dam hydro-electric project. The government suspended the dam in September 2011, not primarily to appease angry locals, but to sendasignal to the US and its allies that it was looking to move away from China and toward the West. The Obama administration, which been encouraging suchashift, responded withaseries of official visits, culminating in last month’s trip by the US president.( http://www.wsw/en/artical/2012/12/03/bur-d03 နှင့် Weak democracy hurts Myanmar business
နောက်ဆုံး စစ်ပွဲသတင်းများအား ကာကွယ်ရေ ၀န်ကြီးဌာနမှချပေးသလောက်ကိုသာ ပြောခွင့်ရသော သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မှူးဇော် အား ( ပြည်တွင်းစစ်တွင် တိုက်လေယာဉ်သုံးခွင့် မရှိကြောင်း သတင်းဌာန AFP)သို့ ပြောဆိုမိရာမှ၊ ပြောရေးဆိုခွင့် ရာထူးမှ ပြန်ကြားရေးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၏ တောက်တိုမယ်ရ အကူအဖြစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။
၂၀၁၃ ဇန်နာဝရီလ ၄ ရက်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တပ်မတော်မှ စီစဉ်ပေးသော လွတ်လပ်ရေးနေ့အား အကျဉ်းရုံး စီစဉ်ပြီးနောက် ဇန်နာဝရီလ (၆) ရက်နေ့မှ လက်ဂျားယန်ဒေသသို့ အကြီးအကျယ်ဗုံးကျဲစစ်ဆင်ရေးစတော့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ သူမအနေဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ခံရလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပါဝင်ပတ်သက်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဇန်နာဝရီလ ၁၀ ၇က်နေ့တွင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သောကြောင့် စာရေးသူမှ ကေအိုင်ကေသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ ကေအိုင်အေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် တောင်းခံစာပေါင်း ၂၂ ခုအား ၂၀၁၂ ဇန်နာဝရီလမှစပြီး ၂၀၁၃ ဇန်နာဝရီလ (၂) ရက်နေ့အထိ ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အခိုင်မာဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဇန်နာ)ရီလ၂၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်မှ ဟာဝိုင်ယီ (အမေ၇ိကန်ပြည်ထောင်စု) အား ထပ်မံခရီးစတင်သော နေ့သည် ကချင်တို့၏ ခါရာတောင်တန်းအား ဗုံးမိုး အကြီးမားဆုံး ရွာသွန်းဖြိုးခဲ့သောနေ့ ဖြစ်သည့်အပြင် ခါရာတောင်တန်း ဗုံး ဟောင်ဝေဇာ အမြောက်လှိုင်းအောက်တွင် ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ ၃၆၈ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁၂၁၄ ယောက် ဒဏ်ရာရသော အဖြေထွက်ခဲ့ပြီး ကချင်ဘက်မှ ၄၆ ယောက်ကျဆုံးကာ ၂၃၃ ယောက် လှိုင်ဇာ ဆေးရုံရောက်သွားခဲ့၏။ ဖေဖေါ်ဝါ၇ီလ ၁ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာဝိုင်ယီမှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်ရောက်ပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကကကြီးနှင့် နောက်ချန် လက်ပံတောင်းကော်မရှင်တို့ ရေးသားထားပြီးသော အစီရင်ခံစာအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံပြသခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အစီရင်ခံစားအား အသေခြာပင်မဖတ်တော့ပဲ သဘောတူလက်ခံခဲ့သည်ဟု ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှုး မှ ပြောသည်။ သို့သေည် မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ လက်ပံတောင်း အစီရင် ခံစားအား ပြန်လည်ဖတ်ရှု့ခဲ့ပြီး အချို့သော အချက်များအား ပြင်ဆင်လိုသော်လည်း သူမ လက်ခံပြီးသားမို့ ဆက်လက် ရှေ့မတိုးတော့ပဲ ထုတ်ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့၏။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော လက်ပံတောင်းကော်မရှင်မှ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရန် လုံခြုံရေး ထောက်လှမ်းရေးအစီစဉ်များအား ရဲချုပ်မှ တင်သွင်းသော မတ်လ ၈ ရက် ၂၁၀၃ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံခဲ့ပြီး မတ်လ ၁၂ ရက်တွင် ဂျာနယ်များသို့ပေးပိုပြီး ကော်မရှင် ဥက္ကဌမှ မတ်လ ၁၃ ရက် ကိုဖုန်းမော်ကျဆုံးသောနေ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်ရေးနေ့ဟု အတိုက်ခံတို့ဘက်မှ တောင်းဆိုထားသော နေ့တနေ့အား ပြက်ပြယ်ရန် ဦးအောင်မင်းနှင့် ဦးရွှေမန်း၊ ရဲချုပ် ကိုကိုအပြင် ဦးခင်ရီပါသော အစည်းဝေး မတ်လ ၃ ၇က်နေ့တွင် အကျဉ်းရုံးနေပြည်တော်ဝယ် ပြုလုပ်ကာ တမင်တကာ ချမှတ် အကွက်ဆင်၍ လုပ်ခဲ့ကြ၏။
မှတ်ချက်= နိဂုံးပိုင်းတွင် မိတ္ထီလာ အကြောင်း အဖြစ်မှန်နှင့် အကြံစည်များအား တင်ပြပေးပါမည်။
စက်စီစိတ်အသွင်းခံထားရတဲ့( မု )မျက်နှာဖုံး မော်ဒယ်..ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်ရဲ့ရေစိုဖက်ရှင်....
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်အား စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ ရလဒ်မှာ နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
on Friday, 29 March 2013 18:53
မတ် ၂၀ ရက်မှ ၂၃ ရက် အထိ မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်အပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ ရလဒ်မှာ နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်ရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်မိုးက မတ် ၂၉ ရက် ညနေက Eleven Media Group သို့ ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ ရလဒ်မှာ နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေသည့်အပြင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခတွင် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ခဲ့သူ ၁၃ ဦးနှင့် ဆက်စပ် ကျူးလွန်သူများကိုလည်း လိုက်လံ ဖမ်းဆီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်မိုးက “ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုက ပြီးခါနီးပါပြီ။ သိပ်မကြာခင်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်ကို တင်ပြပြီးတော့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမယ့် အပိုင်းတွေကို အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သွားပါ့မယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဖြစ်စဉ်မှာ အဓိက ကျူးလွန်တဲ့ ၁၃ ဦးကတစ်ဆင့် ကွင်းဆက် ကျူးလွန်သူများကို မှားမဖမ်းမိအောင် တိတိကျကျ စုံစမ်းပြီး ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးနေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် မတ် ၂၉ ရက် ညနေပိုင်းအထိ သေဆုံး သူ ၄၃ ဦးအနက်မှ ၄ ဦးသာ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း စစ် ဆေးသိရှိရပြီး မိသားစုနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ထုတ်ပြန်ထားသော ပုဒ်မ ၁၄၄ နှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်၍လည်း ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်မိုးက “ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ ရလဒ်တွေပေါ် မူတည်ပြီး အထက်အဆင့် အမိန့်နဲ့ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းသွားဖို့ ရှိပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
The Irrawaddy (Burmese Version)'s Page
မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဟောပြောမှုများဖြင့် နာမည်ကျော်ကြားလာပြီး လတ်တလော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ သင်္ကေတအဖြစ် ၉၆၉ ကို အမှတ်တံဆိပ်ကို သတ်မှတ်ရေး ဦးဆောင်ဟောပြောနေသည့် မန္တလေး၊ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်မှ သက်တော် ၄၅ နှစ် အရွယ်ရှိ ဦးဝီရသူသည် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားစေသော စာရွက်စာတမ်းများ ဖြန့်သည်ဟုဆိုကာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး မတ်လတွင် အကျဉ်းကျနိုင်ငံရေး ဘုန်းတော်ကြီးများ လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ၊ အောက်တိုဘာလတွင် အစ္စလမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသင်း ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ဘာသာရေးပဋိပက္ခများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဧရာဝတီအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင် သာလွန်ဇောင်းထက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။
မေး။ ။ မိတ္ထီလာပဋိပက္ခမှာ သေဆုံးမှုက ၄၂ ဦးထိရှိလာပြီလို့ အစိုးရက တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တယ်။ အရှင်ဘုရားကလည်း မိတ္ထီလာကို သွားရောက်ပြီး တားမြစ်ခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့တော့ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိ အသေအပျောက်တွေ များလာရတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။အသေအဆုံးများတာက ဒုတိယနေ့(မတ် ၂၁) ပိတ်မိနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေ၊ အဲဒီအကြောင်းပြောရရင်တော့ ဖြစ်ပြီးလို့ မီးတွေဘာတွေရှို့ကြတဲ့အခါမှာ ရှောင်တိမ်းနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေ၊ အဲဒီမွတ်စလင်တွေက ကျောင်းသားတွေများတယ်။ အာရဗီစာသင်ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေများတယ်။ အရပ်သားတွေလည်း ပါတယ်။ သူတို့တတွေကို ရယက ဖွက်ပေးထားတယ်။ လုံခြုံရေးလည်း ချပေးထားတယ်။ နောက်တနေ့ မနက် ၄ နာရီ လုံခြုံရေးတွေ ရုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ ပုန်းအောင်းနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေ သွေးကြွသွားပြီးတော့ ကြွေးကြော်သံတွေ ကြွေးအော်တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေက သံပြိုင်အော်ကြတယ်။ အဲဒီတော့မှ မြို့လူထုက မွတ်စလင်တွေ ဒီမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ သိသွားကြတယ်။ သိသွားတဲ့အချိန်မှာ လာဝိုင်းကြတယ်။ ၀ိုင်းတဲ့အချိန်မှာ သူတို့က ဘေးပတ်လည်လည်မှာဆိုရင် ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုရင် ဗလီရှိတယ်။ ညာဘက်မှာဆိုရင် မီးလောင်ပြင်ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တည့်တည့်မှာဆိုရင် ကုန်းမြင့်ကြီးရှိတယ်။ သူတို့က မပြေးသာတော့ဘူး။ အဲဒီမှာ ၀ိုင်းတဲ့အချိန်မှာ မွတ်စလင်ထဲက တယောက်က လေးခွနဲ့ သံဃာတပါးကို ပစ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဗမာလူအုပ်က သွေးကြွလာတယ်။ ဗမာလူအုပ် နီးသထက်နီးလာတဲ့အချိန်မှာ အက်ဆစ်ထုပ်တွေ ဘာတွေပစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်အထိ တိုက်ခိုက်မရှိတာဘူး။ ဗမာလူအုပ်ကလည်း ရပ်ကြည့်နေတယ်။ သူတို့တွေကလည်း ထွက်မလာဘဲ ဟိုဟာနဲ့ ဒီဟာနဲ့ ပစ်တယ် ဒါပါပဲ။ အဲဒီနေ့ မိတ္ထီလာကို ဦးဇင်းရောက်နေတာ။ ဦးဇင်းက ၂၀ ရက်နေ့ ညကတည်းက ရောက်နေတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဦးဇင်းရော၊ ရွှေည၀ါရော၊ မင်းကိုနိုင်တို့တောင်ရောက်နေပြီ။ အဲလိုဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အယောက် ၂၀ လောက်က ဗမာလူအုပ်ကြီးကို အသေခံပြီးထွက်တိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ကျဆုံးကြတယ်။ တနေရာတည်းကို ၉ လောင်း၊ ၁၀ လောင်း၊ ၁၁ လောင်းလောက်ကျတယ်။ အဲဒီလို တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ လုံခြုံရေးတွေက ကျန်တဲ့သူတွေကို ဖော်ထုတ်ကယ်တင်သွားတယ်။ အဲဒါ အကျအဆုံး အများဆုံးပဲ။ တနေရာတည်းမှာ။ ကျန်တာတွေကတော့ အပြန်အလှန်မီးရှို့ကျတယ်။ ဟိုနေရာ တယောက်ကျ၊ ဒီနေရာ တယောက်ကျ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကတော့ အဲဒီနေရာမှာပဲကျတာ။
မေး။ ။ ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဗီဂျေနမ်ဘီးယားနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနတွေက မိတ္ထီလာ အဓိကရုဏ်းက စနစ်တကျ စီစဉ်ထားတဲ့ ရက်စက်တဲ့ လူသတ်အကြမ်းဖက်မှုကြီးလို့ ရေးသားနေကြပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဆရာတော်ရဲ့ အမြင်လေးသိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ပထမနေ့နဲ့ ဒုတိယနေ့မှာ ဘယ်သူမှ စနစ်တကျမရှိပါဘူးဗျာ။ တကယ်တန်းစနစ်တကျရှိတာက ပထမနေ့မှာ ကုလားရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေကမှ စနစ်တကျရှိတာ။ သူတို့က တုတ်တွေ၊ ဒုတ်တွေ၊ ဓါးတွေလက်နက်တွေ အကုန်ကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ ဗမာမှန်သမျှကို အကုန်ခုတ်တာ။ သံဃာတပါးအသတ်ခံရတယ် ကြားတဲ့အခါမှာ ဗမာလူအုပ်ကြီးက ကုလားရပ်ကွက်ထဲကို တိုးဝင်သွားတာ။ တကယ်တန်းကျတော့ သူတို့မှာ ဘာလက်နက်မှ မရှိဘူး။ ၁၀ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ပဲ တုတ်ပါတယ်။ အဲဒီတုတ်ကလည်း အိမ်ဖျက်ဆီးထားတဲ့နေရာကနေ ပါလာတဲ့တုတ်။ အဲဒါပဲ။ ကိုယ်က တုတ်ပဲ ပါတယ်။ ဘာလက်နက်မှ မပါဘူး။ ဟိုကလူတွေက ဓားတွေနဲ့ ဆီးခုတ်တယ်ဆိုတော့ အတုန်းအရုန်း ကျတယ်ဗျ။ ၂ ယောက်သေပြီးတော့ ၁၆ ယောက်လောက် ဒဏ်ရာရတယ်။ ဓားခုတ်ဒဏ်ရာနဲ့ တကယ့်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာပေါ့။ အဲဒီလိုစီစဉ်ထားတာက မွတ်စလင်ရပ်ကွက်ထဲကဖြစ်တယ်။ ဒုတိယနေ့ကလည်း ဘယ်သူမှ မစီစဉ်ဘူး။ အသံကြောင့် ဖားသေဖြစ်သွားတာ။
မေး။ ။ အခု နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေက ၉၆၉ နဲ့ပတ်သက်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက်တွေဆိုပြီး ရေးလာကြတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါ ဆရာတော်အနေနဲ့ ၉၆၉ အဓိပ္ပာယ်ကို နည်းနည်းလေး သိအောင်ရှင်းပြပေးပါလား။
ဖြေ။ ။ ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။ ပထမအစ ဂဏန်း ၉ က ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါးရည်ရွယ်တယ်။ ဒုတိယ ဂဏန်း ၆ က တရားဂုဏ်တော် ၆ ပါးကို ပြောတာ။ တတိယ ဂဏန်း ၉ က သံဃာ့ဂုဏ်တော် ၉ ပါးကို ရည်ရွယ်တာ။ ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာ ၃ ပါးရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းက ဗုဒ္ဓံသရံဏံ၊ အရဟံတို့ ဓမ္မစကြာတို့ စသည်ဖြင့် အဲဒါတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့သင်္ကေတဖြစ်သလို ၉၆၉ က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တယ်။ ၉၆၉ ကို မဆီမဆိုင်ဆွဲထည့်တာကတော့ တရားခံရှာမရလို့ တွေ့ရာမြင်ရာလူကို ထုထောင်းရိုက်နှက်ပြီးတော့ တရားခံလုပ်သလိုမျိုးပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ၉၆၉ က မိတ္ထီလာမှာ တရွက်မှ မရောက်ဘူးဗျ။ ဘယ်သူမှလည်း လာမဖြန့်ဘူး။ ဦးဇင်းတရားဟောတုန်းက အဲဒီမှာ စတေကာတွေ ၂၅ လောက် ဖြန့်ခဲ့တယ်။ အဲဒီစတေကာကလည်း Save Our Future အဲဒါလေးပါပဲ။ အဲဒါကို မဆီမဆိုင် ၉၆၉ ကို တရားခံ လုပ်နေတာကြီးက တခြားစီပါဗျာ။ တကယ်တန်းတော့ ဘုရားတရားသံဃာ ဂုဏ်တော်တွေပါ။ တကယ်အပြစ်ကင်းပါတယ်။
မေး။ ။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာ မွတ်စလင်တွေရဲ့ ဗလီတွေ၊ နေအိမ်တွေနဲ့ ဈေးဆိုင်တွေ အဖျက်ဆီးခံရတယ်။ ကြို့ပင်ကောက်က အဖျက်ဆီးခံရတဲ့ နေအိမ်နဲ့ ကားတွေပေါ်မှာ ၉၆၉ ဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကို မင်အစိမ်းနဲ့ ရေးတာတွေရှိနေပါတယ်။ ဆရာတော်အနေနဲ့ ဗလီတွေကို ဖျက်ဆီးနေတာတွေ၊ ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပေါ်မှာ ၉၆၉ ရေးထိုးသွားတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ဒကာကြီး ပဲခူးတိုင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နေရာတော်တော်များများမှာ ဦးဇင်းက မြို့ခံတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မရှိတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီအကြောင်းအရာကို ဘာမှ မသိရဘူး။ ဦးဇင်းတို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နေရာတွေမှာတော့ ဦးဇင်းမူဝါဒ၊ လမ်းစဉ်အတိုင်း အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘာပြသနာမှမဖြစ်ဘူး။ ဦးဇင်း အခု အမှုတွေ အများကြီးကိုင်တွယ်ထားတယ်ပေါ့။ မွတ်စလင်နဲ့ ဗမာတွေနဲ့ ဖြစ်တဲ့အမှုတွေ။ မုဒိမ်းမှုတွေ၊ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ၄ တန်းကျောင်းသူ၊ ၇ တန်းကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသူတွေကို ပြုကျင့်တဲ့ အမှုတွေများတယ်။ နောက် ကာယကံအလျောက် ထိုးကြိတ်စော်ကားတဲ့ အမှုတွေများ၊ ဘာသာ သာသနာကိုစော်ကားတဲ့အမှုတွေ များတယ်။ နောက်ဆုံးဗျာ ရဟန်းသံဃာကို ပက်ပက်စက်စက် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဆဲတဲ့အမှုတောင်ပါတယ်။ တရားမ၀င် ဗလီတွေပါတယ်။ ကျူးကျော် ဗလီတွေပါတယ်။ မွတ်စလင်သချိုင်းတွေပါတယ်။ ဒီအမှုတွေအားလုံးကို ဦးဇင်းဆီမှာ ၅၀ ကျော် လက်ခံထားပြီးတော့ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဖြေရှင်းပြီးတော့ အကြံဥာဏ်ပေးရတာပေါင်းရင် ၁၀၀ ကျော်ရှိနေပြီ။ သိတာအကုန်လုံးကို ဦးဇင်းက ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ဖြေရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ ဆုံးမ သြ၀ါဒပေးတဲ့အတွက် ဦးဇင်းထက် ကြီးတဲ့ သံဃာတွေရော၊ လူတွေရော ဦးဇင်းစကား နားထောင်ကြတယ်။ ဥပဒေဘောင်ထဲက ဖြေရှင်းတဲ့အတွက် ဘာပြသနာမှ မရှိဘူး။ ဦးဇင်းတို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ တကယ် ၉၆၉ ဆိုတာ အကြမ်းမဖက်ဘူး။
မေး။ ။နေပြည်တော် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၉၆၉ အမှတ်တံဆိပ်က ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ တရားဝင်သင်္ကေတအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတာမရှိပါဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အကြောင်းကြားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြင်လေးသိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ဟုတ်ပါတယ်။ ဦးဇင်းတို့ သိသလောက် မှတ်သလောက် တတ်သလောက်ပဲ လိုက်လံဖြန့်ဖြူးနေကြတာလေ။ ဒါကြီးကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ ဖြန့်ဖြူးနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဥပမာဆိုကြပါစို့၊ ဒီဟာကို ပြင်ဆင်တဲ့သူက ပြင်ဆင်တယ်။ လှူဒါန်းတဲ့သူက လှူဒါန်းတယ်။ လိုက်ဖြန့်တဲ့သူက လိုက်ဖြန့်တယ်။ အစိုးရဆီမှာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ ဒါတွေကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာမဟုတ်ဘူး။
မေး။ ။ဆရာတော်ရဲ့ အမျိုးသားရေး ပေါ့ပေါ့မတွေးနဲ့ ဆိုတဲ့ တရားဟောပြောမှုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မင်းကိုနိုင်က ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ NLD က ခွပ်ဒေါင်းမဟုတ်ဘူး။ မွတ်စလင်တွေရဲ့ မွတ်ဒေါင်းလို့ ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြပေးပါ ဘုရား။
ဖြေ။ ။ဦးဇင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တလျှောက်လုံးထောက်ခံခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်အရေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တကယ်တန်းကျတော့ ဘာမှ အားမကိုးလောက်ဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာကြောင့် ဒီလိုနှုတ်ဆိတ်သွားသလဲဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နားရောက်နေတဲ့သူတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ပြီးတော့ မြို့တွေတော်တော်များများရဲ့ NLD ရုံးတွေမှာ ရုံးထိုင်တာက မွတ်စလင်တွေများတယ်။ သူတို့တတွေကြောင့် ဗမာတွေက NLD ရုံးကိုသွားပြီးတော့ လှည့်ပြန်လာရတယ်။ အချို့မြို့တွေမှာဆိုလိုရှိရင် မွတ်စလင်အိမ်ကိုငှားပြီး ရုံးဖွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် မွတ်စလင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး အာဇာနည်နေ့လိုမျိုးတောင်မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အထိမ်းအမှတ် နေ့မျိုးမှာ ဆွမ်းကပ်ဖို့ အိမ်ရှင်က တားမြစ်လို့ ဆွမ်းမကပ်ရဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ခွပ်ဒေါင်းက ခွပ်ဒေါင်းအသွင်မဆောင်ဘဲ မွတ်ဒေါင်းအသွင်ဆောင်လာပြီလို့ ဦးဇင်းဟောတာလေ။
မင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ အဖွဲ့ ကို ဦးဇင်းက ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ တအားအားကိုးတယ်။ အနာဂတ်အတွက် အများကြီးမျှော်လင့်ထားတာ။ ဒါပေမယ့်သူတို့လည်း ရခိုင်အရေး အခင်းမှာ ပြည်သူလူထု ပြောပလောက်အောင် အားကိုးစရာမရှိဘူး။ အဖွဲ့အစည်းတရပ်အနေနဲ့ ပြည်သူ့ဘက် ရပ်တည်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ တဦးတယောက် ထပြောတယ်။ ရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေကူညီပြီး အပြန်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်။ ဒါပဲ။ ကြေညာချက်တရပ်ထုတ်ပြီးတော့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရိုဟင်ဂျာက တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူးတို့၊ အခုလို ဘင်္ဂလီတွေက ရခိုင်တွေ အတုံးအရုံးသတ်ဖြတ်နေတာကို လုံးဝ ရှုတ်ချပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ မတွေ့ရဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မမှာ အမြဲတမ်း ဓမ္မဘက်က ရပ်တည်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်းကိုနိုင်က ပထမ ရခိုင်အရေးအခင်းမှာ တကယ်တန်းကျတော့ ဓမ္မဘက်မှာ ရပ်တည်တာ မတွေ့ရတော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် အဲဒါကို ထည့်ဟောတာ။
မေး။ ။ဆရာတော်ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေမှာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ၇၈၆ အမှတ်တံဆိပ်ရေးထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ အားမပေးရဘူးလို့ ပါနေတော့ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုတွေဖြစ်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း ကြားမှာ မယုံကြည်မှုတွေ၊ မုန်းတီးမှုတွေ မဖြစ်စေနိုင်ဘူးလားဘုရား။
ဖြေ။ ။အော် ဒကာကြီးရဲ့။ အဲဒါက ဗမာနည်းမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ မွတ်စလင်နည်းလေ။ မွတ်စလင်တွေ အဲဒီအတိုင်း ကျင့်သုံးတာ။ ဒကာကြီး မြို့ထဲလှည့်ကြည့်လေ မွတ်စလင်တွေက ဗမာဆိုင် အားပေးတာ ဘယ်နှယောက်ရှိသတုန်း။ သူတို့က သူတို့ဆိုင်တွေကို အားပေးရင် ဦးဇင်းတို့ကလည်း ဦးဇင်းတို့ ဆိုင်ကို အားပေးရမှာပေါ့။ ဆိုတော့ ဦးဇင်းဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဆိုင်တွေသာ ဦးဇင်းတို့အားပေးရင် ဒီလိုစော်ကားခံရတာ တွေ မရှိနိုင်ဘူးလေ။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ပြသနာဖြစ်တယ် ဒီလောက်တော့ မပိုဘူးပေါ့ဗျာ။ အမျိုးသားရေး ပြသနာအဆင့်မရောက်နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်အချင်းချင်းဆိုင် မ၀ယ်ဘဲ ရွှေဆိုင် မွတ်စလင်ဆိုင်ကို သွားတော့ အစော်ကားခံရတာပေါ့။ အခုလို စော်ကားခံရတော့ အမျိုးသားရေးပြသနာအဆင့်ရောက်သွားတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဈေးဝယ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ သွေးခွဲရာမရောက်ပါဘူး။ ကိုယ့်လူကာကွယ်ရာတောင် ရောက်တယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကိုယ်ပြန်ကာကွယ်ရာရောက်တယ်။
မေး။ ။အခု ပဋိပက္ခတွေ ပျံ့နှံ့မှုကြီးလာတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာ စိုးရိမ်မှုတွေ၊ ကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ် လာနေပြီ။ ဒါတွေ ချုပ်ငြိမ်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လို့ ဆရာတော်အကြံပြုချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ကျုပ် အမြဲတမ်းအကြံပြုနေတယ်။ ထောင်ကထွက်ကတည်းက မွတ်စလင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို အကြံပြုနေတယ်။ အခုလည်း အကြံပြုနေတယ်။ မနေ့ညကလည်း အကြံပြုနေတယ်။ ဦးဇင်းတို့တွေက ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဖြေရှင်းမှဖြစ်တော့မယ်။ မွတ်စလင်တွေကလည်း မြို့ရွာတွေမှာ ရပ်မိ၊ ရပ်ဖအသင်းဖွဲ့ပါ။ ဗမာတွေကလည်း ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာမှာ ရပ်မိရပ်ဖ အသင်းဖွဲ့ပါ။ အဲဒီအဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့က ပြသနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်လူကိုယ် ထိရောက်စွာအရေးယူရမယ်။ အဲဒီလို ကိုယ့်လူကိုယ် ထိရောက်စွာ အရေးယူတဲ့အချိန်မှာ တဖက်လူက အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းသလိုမျိုး လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင် ကိုယ့်လူကပဲ ဖြိုးခွင်းလို့မရအောင် ရှေ့မှာ မားမားရပ်တည်ပြီးဖြေရှင်းပါ။ အဲဒီပုံစံလိုမျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် တကမ္ဘာလုံး ငြိမ်းချမ်းမှာပါ။
မေး။ ။ သမ္မတအနေနဲ့ မနေ့က မိတ္ထီလာပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ မွန်မြတ်တဲ့ ကိုးကွယ်ယုံ ကြည်မှုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အလွဲသုံးတဲ့ အယူသီး အစွန်းရောက်လုပ်ရပ်တွေ၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာတရားတွေကြားမှာ အမုန်းတရားတိုးပွားအောင် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ ထိထိရောက် ရောက် အရေးယူမယ်လို့ ပြောထားတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဆရာတော်အမြင်လေးသိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။အဲဒါအရေးယူရမယ်။ ပေါ်ပေါ်တင်တင်လုပ်တဲ့သူကို အရေးယူတာထက်၊ နောက်ကွယ်ကနေ သွေးထိုးပြီးတော့ သပ်လျှိုနေတဲ့သူတွေကို အရေးယူတာက ပိုပြီးထိရောက်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်- မော်လ၀ီ ဆရာတွေပေါ့။ သူတို့တွေက ကလေးလေးတွေကို စာသင်ပေးတယ်။သူတို့တွေက သွေးခွဲစကားတွေကို ပြောပြီးတော့ သွေးခဲတာများတယ်။ ကလေးလေးတွေက ရဟန်းသံဃာတွေကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်က တကယ့်ရန်သူလိုပဲ။ ဗမာတွေကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်က တကယ့်ရန်သူကြီးတွေလို။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ သွေးခွဲတဲ့သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေကိုမှိုင်းတိုက်ပြီးတော့ သွေးခွဲနေတဲ့နေတဲ့သူတွေကို အရေးယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။
ကောလာဟလ သတင်းများကြောင့် ပြည်သူများအကြား စိုးရိမ်ထိတ်လန့် နေခဲ့ကြရာမှမတ် ၂၉ ရက် ယနေ့တွင် တည်ငြိမ်မှုများ ရှိလာပြီး ရန်ကုန်မြို့နေလူထု ပုံမှန်အတိုင်း လှုပ်ရှားသွားလာနေပြီဖြစ်
on Friday, 29 March 2013 16:03
ယုဇနပလာဇာ အနီးဝန်းကျင်အား မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက မိတ္ထီလာ၊ ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်းတို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များကြောင့် ပြည်သူများအကြား စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများ ရှိနေခဲ့ရာမှ ယနေ့ မတ် ၂၉ ရက်တွင်တည်ငြိမ်မှုများ ရှိလာပြီး ရန်ကုန်မြို့နေ လူထုလည်း ပုံမှန်အတိုင်း လှုပ်ရှားသွားလာနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မတ် ၂၄ ရက်မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းအသွင်ဆောင် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆူပူလှုံ့ဆော်မှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အားလုံးမှ ဆိုင်ခန်းအားလုံးကို ည ၉ နာရီမတိုင်မီ ပိတ်သိမ်းရန်နှင့် အခြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဒေသန္တရအမိန့်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရသည်။ ထို့အတူ မတ် ၂၅ ရက်က မင်္ဂလာဈေးအနီး ဆူပူမည်ဟူသော ကောလာဟလ သတင်းများကြောင့် ညနေပိုင်းတွင် မင်္ဂလာဈေးနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းပေါ်ရှိ ဈေးဆိုင်များကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ကြပြီး ပြည်သူများမှာလည်း အထိတ်တလန့်နှင့် အသွားအလာ နည်းပါးသွားခဲ့ရသည်။
ထို့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးပါတီများကို မတ် ၂၆ ရက်က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ရှိရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော စုရုံးလှုံ့ဆော်မှု ဖြစ်စဉ်များတွင် နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိနေသည့်အပေါ် ထိန်းသိမ်းပေးရန်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယခင်ထက် လုံခြုံရေးယူထားမှုများကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
ယင်းနောက်မတ် ၂၅ ရက်ညပိုင်းမှစကာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ရန်ကုန်မြို့တွင်း လုံခြုံရေးအခြေအနေကို တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရပ်ကွက်များ အသီးသီးတွင်လည်း ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက်သားများက ရပ်ကွက်တွင်း သီးသန့်လုံခြုံရေးများ လုပ်ဆောင်လာကြသည်ဟု သိရသည်။
သို့သော် မတ် ၂၈ ရက်ညပိုင်းအထိ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်မှုများ ရှိနေခဲ့သည့် နည်းတူ ည ၉ နာရီမတိုင်မီ ဆိုင်များပိတ်သိမ်းရန် ညွှန်ကြားမှုများ ဆက်လက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မင်္ဂလာဈေး အနီးဝန်းကျင်အား မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
မိတ္ထီလာမြို့နှင့် ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းတို့၏ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများနှင့် ကောလာဟလ သတင်းများ အဓိက ရိုက်ခတ်ခဲ့သော မင်္ဂလာဈေး အနီးတစ်ဝိုက်နှင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ဆူးလေဘုရားဝန်းကျင် မြို့လယ်နေရာများတွင် မတ် ၂၉ ရက် မွန်းလွဲတွင် မြို့နေပြည်သူများမှာ ပုံမှန်လှုပ်ရှား သွားလာနေပြီ ဖြစ်သည်။
''ကြားစကတော့ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ အများပိတ်သလို ဆိုင်တွေပိတ်ခဲ့ရတယ်။ နောက်မှ ကောလာဟလတွေဆိုတာ သိရတယ်။ အခုတော့ ဈေးဆိုင်ကို ပုံမှန်ပြန်ဖွင့်နေပါပြီ။ အရောင်းအဝယ်ကတော့ နည်းနည်းအေးနေ သေးတာပေါ့'' ဟု မင်္ဂလာဈေးတွင် အလှကုန်နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ရောင်းချသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မတ် ၂ဝ ရက်က မိတ္ထီလာမြို့ ပဋိပက္ခများမှ စတင်ကာ ရမည်းသင်း၊ တပ်ကုန်း၊ လယ်ဝေး စသည့်မြို့နယ်များအတွင်းရှိ ကျေးရွာအချို့သို့ ကူးစက်ခဲ့သည်။ယင်းမှဇီးကုန်း၊ အုတ်ဖို၊ ကြို့ပင်ကောက်၊ နတ္တလင်း စသည့်ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း မြို့နယ်အတော်များများတွင် အကြမ်းဖက်သူများ၏ လှုံ့ဆော်မှုများကြောင့် ပဋိပက္ခများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရသည်။
မတ် ၂၈ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ပြည်သူသို့ ရှင်းလင်းချက် ပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံမှုကိုထိပါးသည့် လုပ်ရပ်မှန်သမျှကို လုံးဝလက်ခံမည် မဟုတ်ဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတမှ ပြည်သူသို့ ရှင်းလင်းချက် ပြောကြားပြီးနောက် မတ် ၂၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲအထိ ရရှိသော သတင်းများအရမူ မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်တွင် ဆူပူမှုများ မရှိတော့ဘဲ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း မြို့နယ်များတွင်လည်း တည်ငြိမ်မှုများ ပြန်လည်ရရှိလာကာ ပုံမှန်နီးပါး အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဂျပန်..သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကတရုတ်ကိုသွားရောက်ဖို့ ရှိ
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာမယ့် ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံသွားမယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက မီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ ခရီးစဉ် အချိန်ဘယ်လောက် ကြာမြင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးဘူးလို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်ထဲမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြို့တော်တိုကျိုအပါအ၀င် ၁၉၈၅-၈၆ ခုနှစ်တွေက ပညာသင်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ ကျိုတိုမြို့ရှိ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မယ့်အပြင် ဂျပန်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေလည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းမှုတွေရှိနေတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်ပြည်သူတွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေထိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါ စိတ်လှုပ်ရှားစောင့်မျှော်နေကြတယ်လို့ တိုကျို၊ ကျိုတိုနှင့် နာရာမြို့တွေက ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေကလည်း ဒီဗွီဘီကို ပြောပြကြပါတယ်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတသစ် ရှီဂျင်းပင်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ အာရှဖိုရမ်ကို တက်ရောက်ဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့မှာ တရုတ်နိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ နှစ်ရက်ကြာမြင့်မယ့် ဒီခရီးစဉ်ထဲမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟုိုင်နန်ပြည်နယ်မှာ ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ အာရှဆုိုင်ရာ ညီလာခံကို တက်ရောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်သံရုံးရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတာပါ။ ဒီခရီးစဉ်ဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သက်တမ်းအတွင်း တတိယမြောက် ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။